အနာဂတ်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုခရီးအတွက် ကျား နှင့် နဂါး ကိုလေ့လာခြင်း
အနာဂတ်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုခရီးအတွက် ကျား နှင့် နဂါး ကိုလေ့လာခြင်း စံနမူနာ ကျားဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ရှိ နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်မှု ၁၃ဝဝ ကီလိုမီတာခန့်ရှိသော အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပြီး နဂါးဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဘက်ရှိ ၂၂ဝဝ ကီလို မီတာခန့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေသော တရုတ်နိုင်ငံကို ဆိုလိုသည်။ နှစ်နိုင်ငံစလုံး လူဦးရေပမာဏ အင်အားကြီးပြီး ဧရိယာကျယ်ဝန်း သော နိုင်ငံများလည်းဖြစ်သည်။ ၂၁ ရာစုအဝင်ယနေ့အချိန်အခါတွင် ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံကျယ်ဝန်းရုံသာမက လူဦးရေပမာဏ များပြားပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု အရှိန်တက်လာနေသည့်နိုင်ငံများ ဖြစ်လာသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ကမ္ဘာက ယခင်ကထက်ပို၍ စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာသည်။ ၎င်းတို့နှစ်နိုင်ငံအကြားတွင် မြန်မာနိုင်ငံတည်ရှိသည်။မြန်မာ နိုင်ငံသည် မကြာမီကာလတွင် Transitional Period ဟုခေါ်သော စနစ်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲရေးကာလ အဆုံးသတ်၍ စီးပွား ရေးမူဝါဒသစ်များဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုခရီးရှည်ကြီးကို လျှောက်လှမ်းရတော့ မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မိမိတို့၏ မျက်စိရှေ့ မှောက်တွင် အရှိန်အဟုန်နှင့် ဖွံ့ထွားလာသော စီးပွားရေး အင်အားကြီး အိမ်နီးချင်း ၎င်းနှစ်နိုင်ငံ၏ အခြေအနေများကို နမူနာကောင်းများအဖြစ် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသုံးသပ် အကဲဖြတ်နေသင့်သည်။ ၎င်းတို့၏ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို လေ့လာခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ မိမိနိုင်ငံ၏ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ရှေ့ဆက်ရမည့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုပန်းတိုင်သို့ အသွားခရီးလမ်းတွင် အခွင့်အလမ်းများကို ဖမ်းဆုပ်ရယူနိုင်ခြင်း၊ စိန်ခေါ်မှုများ၊ အခက်အခဲ များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကျော်လွှားနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ပေမည်။ ထို့ကြောင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အားထုတ်မှုများကို လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဤသို့တွေ့ရှိရ သည်။ စက်မှုကဏ္ဍ၊ ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နှစ်နိုင်ငံစလုံး ဈေးကွက်ယန္တရား ဦးစားပေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ စတင်နေချိန်တွင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ ကြီးမား သောအပြောင်းအလဲများကို တွေ့ကြုံနေရသည်။ သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေး အဆင့်မြင့်နည်းပညာသည် ကမ္ဘာ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုပုံစံကို အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ ၁၉၉ဝခုနှစ် နှောင်းပိုင်းကာလ စီးပွားကျဆင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ အရင်းအနှီးရွှေ့ပြောင်းမှုများ ပေါ်ပေါက်လာပြီး လုပ်သားဈေးသက်သာသောဒေသများသို့ အရင်းအနှီး စီးဆင်းမှုများ အရှိန်အဟုန် ကောင်းလာခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေများသည် ခေတ်ပညာ တတ်၍ ဈေးပေါသည့်လုပ်သားများ အလုံးအရင်းဖြင့်ရှိနေသော အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့အတွက် ၎င်းတို့မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့ ချိန်ခါသင့် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ စက်မှုကဏ္ဍထူထောင်ရေး အားခဲနေ သော တရုတ်နိုင်ငံသည် စီးဝင်လာသော အရင်းအနှီးများနှင့် ပြည်တွင်းရှိ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက် ဒေသများမှ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသော လုပ်သားအင်အားကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြု၍ စိတ်ကူးရှိထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍကို အလေးပေးဆောင်ရွက်မှုသည် တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်နေသော ကုန်ကြမ်းအရင်းအနှီးကုန်စည်၊အခြေခံအဆောက်အဦနှင့် ဝန်ဆောင် မှုလုပ်ငန်းများရရှိရေးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရုံသာမက သန်းပေါင်းများ စွာသော အလုပ်လက်မဲ့ လုပ်သားအင်အားထုကို အလုပ်အကိုင်များ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ စက်မှုကဏ္ဍ ထူထောင်နိုင်ရေး အလေးပေး ဆောင်ရွက်နေစဉ် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ကွဲပြားသောနည်းလမ်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်းကြောင်းကို ချဉ်းကပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။၁၉၉ဝ ခုနှစ်၏ နောက်ပိုင်းတွင် စရိတ်သက်သာ၍ အဆင့်မြင့်သော ကွန်ပျူတာနည်းပညာများကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း များ များစွာထွန်းကားလာသည်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်စဉ် နှင့်အတူ တစ်ကမ္ဘာလုံး အဆက်အစပ် ပိုမိုအာကောင်းလာသော အခါ နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကြီးများ၏ စရိတ်ကျဉ်းသောဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့မှုများ ပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။ လုပ်အားခသက်သာ၍ ခေတ်ပညာတတ် အင်္ဂလိပ်စကားပြော လုပ်သားများ အလုံးအရင်းနှင့် ရှိနေသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါက ဖန်တီး ပေးလာသော အခွင့်အရေးကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ ယခု အချိန်တွင် အိန္ဒိယသည် အိုင်တီနည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ် ငန်းမျိုးစုံကို အထူးအားပေးဆောင်ရွက်နေပြီး ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ရောင်းလိုအားကွင်း ဆက်တစ်ခုလုံးထိန်းချုပ်နိုင်ရေးနှင့် အိုင်တီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးတွင် ဈေးကွက်အသာစီးရနိုင်ရေး အားထုတ်လျက်ရှိသည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မြေယာ၊ လုပ်အား၊ အရင်းအနှီးဖြစ်သည့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစုများအားလုံး အရေးပါသော်လည်း လုပ်အားသည် ယနေ့တိုင်အောင် အရေးကြီးဆုံး အရင်းအနှီးနှင့် အဓိကအကျဆုံးသွင်းအားစုဖြစ်သည်။ အာရှ၏ စက်မှုထူထောင်ရေး စံနမူနာကောင်းများဖြစ်သည့် ဂျပန်နှင့် ကိုရီးယားတို့၏ အောင်မြင်မှု က ဤအချက်ကို ထောက်ခံအတည်ပြုပေးသလို ရှိလာခဲ့သည်။ ယနေ့အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ကို လေ့လာကြည့်လျှင် မှီခိုသူဦးရေ အချိုးအစားကျသွားပြီး လုပ်သားအင်အားစု တိုးလာသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးကြီးသော ကုန်ထုတ် စွမ်းအားစုများဖြစ်သည့် လုပ်အားအရင်းအနှီး အားကောင်းလာသည် ကို ပြသနေသည်။ မှီခိုသူဦးရေအချိုးအစားမှာတရုတ်နိုင်ငံတွင် ၁၉၇၅ ခုနှစ်က (၇၈ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိနေရာမှ ၂ဝဝဝ ခုနှစ် တွင် (၄၆ ရာခိုင်နှုန်း) သို့လည်းကောင်း၊ အိန္ဒိယတွင် ၁၉၇၅ ခုနှစ်က(၇၇ ရာခိုင်နှုန်း)ရှိနေရာ ၂ဝဝဝ ခုနှစ်တွင် (၆၄ ရာခိုင်နှုန်း)သို့ လည်းကောင်း ကျဆင်းခဲ့ကြ သည်။ ထိုသို့တက်ြွကဖျတ်လတ်သော ငယ်ရွယ်သူလုပ်သားအင်အား အရေအတွက် များပြားလာသကဲ့သို့ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းမှာလည်း တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတက်လာလျက်ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းမှာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် (၉၁ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိနေခဲ့ပြီး အိန္ဒိယ၏စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းမှာ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်စာရင်းများအရ (၆၂ ရာခိုင်နှုန်း)ရှိသည်။ သင်ယူမှုအခြေအနေ အဆင့်များကို အကဲခတ် ကြည့်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်များ သင်ယူမှုများပြားပြီး တရုတ်နိုင်ငံရှိ လူငယ်လူရွယ်များမှာ အဆင့်မြင့် ပညာရပ်သင်တက္ကသိုလ်များသို့ တက်ရောက်သူများပြားသည်။ ထို့ကြောင့် အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် လူဦးရေဖွဲ့စည်းမှု အပြောင်းအလဲတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခေတ်လူငယ်ပညာတတ် လုပ်သား အင်အားများကို ထိရောက်စွာ အသုံးချလျက် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်း ကြောင်းဆီသို့ ဦးတည်လျှောက်လှမ်းလျက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။အက်(ဖ)ဒီအိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ . . . . အက်(ဖ်)ဒီအိုင်ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြူပ်နံှမှု ဖြစ်သည်။ နှစ်နိုင်ငံစလုံး ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍကို အထူးအာရုံစိုက်နေစဉ်မှာပင် အရင်းအနှီးချို့တဲ့နေသော ပြည်တွင်းအခြေအနေအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြား အရင်းအနှီးစီးဝင်မှု များကိုလည်းမျှော်သည်။ ကုန်သွယ်မှု ကြောင့် အရင်းအနှီး၊ စားသုံးမှုတို့နှင့် ဆက်နွယ်နေသော ဝယ်လိုအား တိုးလာနေစဉ် အရင်းစုဆောင်းနိုင်မှု တိုးလာရေးကိုလည်း အားထုတ်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် စက်မှုထုတ်ကုန်များကို ပိုမိုထုတ်လုပ်ရင်း ကုန်သွယ်မှု တိုးခဲျ့ရေးပေါ်လစီကို အကောင်အထည်ဖော်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကမူ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးကို အလေးအနက်ထားသည်။ ထိုသို့ ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ အလေးပေးမှုများ၏ နောက်ကွယ်တွင် သွင်းကုန်ပမာဏ တိုးတက်မှုမှာ ပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ၏ နှစ်စဉ်သွင်းကုန်ပမာဏ တိုးတက်ရေးမှာ (၁ဝ ဒသမ ၁)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှာ (၁၂ဒသမ ၂) ရာခိုင်နှုန်း အထိရှိလာခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်မှ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်ကာလ သွင်းကုန် အခြေအနေများကို လေ့လာကြည့်ပါက တရုတ်နိုင်ငံသည် ဂျီဒီပီ၏ (၂၃)ရာခိုင်နှုန်းမှ (၃၃)ရာခိုင်နှုန်းသို့ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ သည် (၁၅)ရာခိုင်နှုန်းမှ (၂၃)ရာခိုင်နှုန်းထိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ပို့ကုန်ပမာဏ တိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော သွင်းကုန်များ တင်သွင်းနိုင်ရန် နိုင်ငံခြားငွေ အလုံအလောက်ရရှိရေး အရေးကြီးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ နိုင်ငံခြားငွေ မလုံလောက်ခဲ့ပါက နိုင်ငံခြားငွေပေးငွေယူ ရှင်းတမ်း၏ သာမန်ငွေ စာရင်းတွင် လိုငွေပြမှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ရရှိပြီးသား ဖွံ့ဖြိုးမှုအနေ အထားကို လှိုက်စားသွားနိုင်သည်။ ကာလရှည်အတွက် ပို့ကုန်အားပြု စီးပွားရေး တည်ဆောက်နေချိန် လတ်တလောတွင် လူသားအရင်း အမြစ်၊ နည်းပညာ၊ သင့်လျော်သော စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်များ ဖန်တီးနိုင်မှုအတွက် အရင်းအနှီးမြောက်မြားစွာလိုအပ်သည်။ဤ အချက်ကို နှစ်နိုင်ငံစလုံးက သဘောပေါက်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ (၆ဝ) ရာခိုင်နှုန်းခန့် သည် နိုင်ငံခြားငွေရင်းဖြင့် လည်ပတ်နေသော လုပ်ငန်းများဖြစ်နေသည်။ ထို့အတူ ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးအားပြုနေသော အိန္ဒိယ တွင် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းအများစုသည် ဆော့(ဖ်)ဝဲ ပို့ကုန်ကဏ္ဍတွင် ကြီးစိုးထားသော်လည်း နိုင်ငံရပ်ခြား လက်ခွဲလုပ်ငန်း (ဆပ်ကန်ထရိုက်) ထက်ဝက်ကျော်မှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နံှသူများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီး မြှုပ်နံှမှု (အက်(ဖ်)ဒီအိုင်)သည် ကျားနှင့် နဂါး ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကကျနေသည်။ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ . . . . ကျားနှင့် နဂါးတို့သည် ပြင်ပကမ္ဘာမှ အရင်းအနှီးများကို မျှော်သကဲ့သို့ နိုင်ငံတွင်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုများ၏ အရေးကြီးပုံကိုလည်း အသိမှတ်ပြုလက်ခံသည်။ တရုတ်နိုင်ငံဆိုလျှင် ရင်းနှီးမြူပ်နံှမှုကို ဦး တည်သည့် စက်မှုပေါ်လစီကို ကျင့်သုံးသည်ဟု သုတေသီ တချို့က ဆိုသည်။ အမှန်တကယ်ပင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ရင်းနှီးမြူပ်နံှမှုကို အားကုန်အင်ကုန် ဂရုပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း လွန်ခဲ့သော ကာလအချို့ကိုကြည့်လျှင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရပ်ခြားမြူပ်နံှမှုများ သည် ဂျပန်နှင့် ကိုရီးယားတို့ရရှိခဲ့သော စံချိန်များကို ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင် ရွက်နေချိန်ပင် စုဆောင်းမှုနှုန်း မြင့်မားရေးအတွက်လည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဘဏ်ချေးငွေပမာဏအများစုသည် အခြေခံအဆောက် အဦများတည်ဆောက်ရေးဆီသို့ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်း များလိုအပ်ချက်ကို ပံ့ပိုးရေးအတွက်လည်းကောင်း စီးဆင်းသွားခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင်မဖွံ့ဖြိုးသေးသော အရင်းအနှီးဈေးကွက်၊ အားနည်း၍ စွမ်းဆောင်ရည် ချည့်နဲ့နေသော ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ထဲမှ ပြည်တွင်း စုဆောင်းငွေများ ပြင်ပကမ္ဘာသို့ စီးထွက်မသွားနိုင်ရေးအတွက်ကို လည်း ကြိုးစားထိန်းသိမ်းခဲ့ကြသည်။ အိန္ဒိယသည် တရုတ်နိုင်ငံကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုကို မဆွဲဆောင်နိုင်သော်လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အားထုတ် မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို အထင်းသားတွေ့မြင်နိုင်သည်။ စုဆောင်းမှု နှုန်းမှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံလောက် မြင့်မားမှုမရှိခဲ့။ ထို့ကြောင့် အိန္ဒိယ သည် ရင်းနှီးမြူပ်နံှမှုအပေါ်တွင် စိန်ခေါ်ချက်များစွာနှင့် ရင်ဆိုင် ခဲ့ရသည်။ ထိုအခြေအနေများကြားမှာပင် အိန္ဒိယသည် ၎င်းတို့မျှော်မှန်းထားသော အရင်းကုန်ထွက်အချိုး (Capital-Output Ratio) ရရှိရန် နိုင်ငံခြားအရင်းအနှီးများ လျင်မြန်စွာ စီးဝင်လာနိုင်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းစုဆောင်းမှုနှုန်း တိုးတက်လာရေးအတွက် ဆက်လက်ကြိုး စားလျက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ လွဲှငွေပမာဏ အများဆုံး ရရှိနေသည့် ထိပ်တန်းထိုနှစ်နိုင်ငံသည် ပြင်ပကမ္ဘာမှ အရင်းအနှီး များကို အလေးထားသကဲ့သို့ ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြူပ်နံှမှု တိုးတက်ရေး အတွက်လည်း ဆက်လက်အားထုတ်နေပေသည်။စာတွေ့မှရသောအသိကိုရင်း၍ . . . . အနောက်အရပ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်၊ မြောက်အရပ်ကိုပဲ မျှော်မျှော် အရှိန်အဟုန်နှင့် ကြီးထွားလာနေသည့်စီးပွားအင်အားကြီး နှစ် နိုင်ငံကို အားကျဖွယ်ရာတွေ့နေရသည်။ ၎င်းတို့သည် တဖြည်းဖြည်းချင်း အင်အားကြီးထွားလာနေသည့်တိုင် ယနေ့ အချိန်ထိ ဆက်လက် အားထုတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ စာရေးသူတို့အနေဖြင့် ကိုယ့်အရပ် ကိုယ့်ဒေသအတွက် ကိုယ်တွေ့မကြုံခဲ့ရသော စာတွေ့များကို ဖတ်ရှုလေ့ လာရင်း ဆောင်စရာများ ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် ရှောင်စရာများ ရှောင် နိုင်ရန် 'သတိ'ထား၍ အမိုျးသားအကျိုးစီးပွားအတွက် လေ့လာ သုံးသပ်အသုံးချရန်သာ ရှိပါသည်။
မြန်မာ့သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာပွဲ ၂၀၁၀ နှင့် ပြည်သူများ၏စိတ်ဝင်စားမှု ယနေ့ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများကြောင့် ကမ္ဘာကြီးဟာ ကမ္ဘာ့ရွာကြီးတစ်ရွာ (Global Village) အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ မည်မျှပင်သုံးစေကာမူ ကုန်ခန်းမသွားနိုင်တဲ့ ခေတ်မီသတင်း အချက် အလက်နဲ့ နည်းပညာအရင်းအမြစ်များကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလျက်ရှိနေကြပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်မှ ကြီးမှူးပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင် များအသင်းတို့ ပူး ပေါင်း စီစဉ်မှုနဲ့ ''မြန်မာ့သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာ ပြပွဲ ၂ဝ၁ဝ''ကိုရန်ကုန်မြို့၊တပ်မတော် ခန်း မမှာ ၂ဝ၁ဝပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ရက်နေ့မှ ၃၁ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပြပွဲမှာ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၆၆ခုမှ ပြခန်းပေါင်း ၁၆၈ခန်းဖြင့် ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ၊ နောက်ဆုံးပေါ် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့် ကွန်ပျူတာအသုံးချ ဆော့ဖ်ဝဲနည်းပညာများကို တစ်နေရာ တည်းမှာ ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာပြပွဲများကို ကျင်းပခဲ့တာဟာ ၁၉၉၉ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတည်း ကဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုအထူးရရှိခဲ့တဲ့ပြပွဲဖြစ်တာကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလို ပြပွဲတွေကို ကျင်းပခဲ့တာပါ။ ယခု မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ် (ယခင် MICT Park) အတွင်းမှာ ပြသခဲ့တဲ့ ပြပွဲများအပါအဝင် ယခုပြပွဲဟာ (၁၅)ကြိမ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ယခင်က တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း မှာတော့ နှစ်စဉ်မတ်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးပတ်တွေမှာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ ICT ပြပွဲ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင် များအသင်းမှ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး(၁) ဦးအောင်ကျော်မိုးက ''အခု ကျွန်တော် တို့ ပြသတဲ့ ICT ပြပွဲ IT ပစ္စည်းတွေ ကိုချည်းပဲ သီးသန့်ပြသတဲ့ပွဲပါ။ ဒါ ကြောင့် ဒီပွဲကိုလာတဲ့သူတိုင်းဟာ IT ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လာ ကြတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အခု ဒီပွဲမှာဆိုရင် ဝင်ရောက်လေ့လာတဲ့ ပြည်သူကအရင်တုန်းက ဒီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ ပွဲတွေထက်ပိုများတယ်။ ဒါ့ပြင်အရင်နှစ်တွေ လုပ်ခဲ့တုန်းကလည်းလာပြီး လေ့လာကြည့်ရှု ဝယ်ယူကြတဲ့သူတွေ တော်တော်များတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ICT ပွဲတိုင်းဟာ အောင်မြင်မှု အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ရခဲ့ပါ တယ်။'' ''ပြည်သူတွေဟာ ipad နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ ဂိမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ 3DVersion တွေ၊ Networking တွေ၊Wireless နည်းပညာပိုင်းတွေ တိုးတက် လာတဲ့အတွက် အဲဒါတွေကိုပိုပြီး စိတ်ဝင်စားလာကြတာတွေ့ရတယ်'' လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Discount နည်းဗျူဟာ ပြပွဲကို လာရောက်လေ့လာကြည့် ရှုကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာ IT နည်းပညာကို လာရောက် လေ့လာကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို ပြပွဲ ကာလအတွင်း ဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့အတွက် ဈေးပေါပေါနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် လာရောက်ကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အင်းစိန်ကလာတဲ့ မသူသူဝင်းတို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်က ''ကျွန်မတို့ ဒီလိုမျိုး IT ပြပွဲဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ဘယ်နေရာ မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပဲ။ ဒီလိုပြပွဲမိုျးဆိုရင်တော့ မရောက်ရောက်အောင်ကိုလာတာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီပြပွဲမှာ ပစ္စည်းတွေ ဈေးလျှော့ရောင်းတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်လိုချင်တာလေးတွေကို လိုက်ရှာပြီးဝယ်ရတာ။ အခုဆို Notebook တစ်လုံးကို နှစ်သိန်း ပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ကို ရောင်းနေတာ။ ဒေါ်လာဈေးကလည်း ကျနေတော့ အခုလို ဈေးတွေ လျှော့ရောင်းနိုင်တာပေါ့။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ပြပွဲသာဆိုတယ် ဈေးကအရင်တုန်းကဈေး နဲ့ သိပ်မကွာဘူး။ အခုကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး ဆယ်သိန်းဖိုး သုံးလုံးနဲ့ Laptop တွေ ဝယ်လာတယ်'' ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ တန်ဖိုး အနည်းအများဟာ ငွေဈေးအတက်အကျပေါ်မှာမူတည် နေတာမို့ အခုလို ဒေါ်လာဈေး ကျနေချိန်မှာ ကွန်ပူျတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဆက် စပ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးရဲ့ ဈေးနှုန်းဟာ ထူးကဲစွာ ကျနေတာကြောင့် သာမန် ပြည်သူများအတွက် အဆင်ပြေစေတာ ကတော့ အမှန်ပါ။ ဆရာမတွေလည်း အားပေး အခုအခါမှာ အခြေခံပညာကျောင်းများမှာတောင် Multi Media Classroom တွေ ရှိနေတာကြောင့် ဆရာ ဆရာမတွေလည်း ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စိတ် ဝင်တစား ရှိနေကြပါပြီ။ ဒါ့ပြင် ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း တွေကို ဆက်သွယ်ချင်ရင် အင်တာနက်ပေါ်ကနေတစ်ဆင့် အချိန်တိုအတွင်း လျင်မြန်စွာ ဆက်သွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့် လူကြီးလူငယ် လူလတ်မရွေး လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးဟာ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြပွဲတွေကို စိတ်ဝင်တစား ရှိလာကြတာဟာ အံ့သြစရာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကမာရွတ်မြို့နယ်မှ အထက်တန်းပြ ဆရာမတစ်ဦးက ''ဆရာမ တို့ကျောင်း မှာMulti Media Classroom တွေ ရှိလာတော့ ဆရာမတို့လည်း အိမ်မှာကိုယ်လည်းသုံး၊ အိမ်က ကလေးတွေလည်းသုံးနိုင်အောင် ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ဝယ်ထားတယ်။ အခုဒီကို လာရတာက အင်တာနက်ဆိုင်တွေ သွားပြီး သူငယ်ချင်းတွေဆီက မေးလ်တွေကို ကူးနိုင်အောင် Memory Stick လေး နှစ်ခုလောက် ဝယ်ချင်လို့ပါ။ ဝယ်လည်းဝယ်လာခဲ့ပြီးပြီ။ အိမ်ကသားအတွက်တစ်ခု ဆရာမအတွက် တစ်ခု၊ ှStick တွေက တော်တော်ဈေးသက် သာတယ်။ ဆိုင်တွေမှာ 2G Stick တစ်ချောင်းကို ၉၅ဝဝကျပ် လောက်ပေးရတာ။ အခုဒီမှာ ၆ဝဝဝကျပ်ပဲရှိတာ။ ဒါကြောင့်လည်း နှစ်ချောင်းဝယ်ဖြစ်သွားတာ''လို့ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ သံဃာတော်တွေလည်း စိတ်ဝင်စားကြ ယနေ့ခေတ်ကာလမှာ လူဝတ်ကြောင် များသာမက သံဃာတော်များပါ IT နည်းပညာများကို စိတ်ဝင်တစား လေ့လာနေကြတာ ကို တွေ့မြင်နေရပါပြီ။ သံဃာတော်များဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်များကို ကမ္ဘာ အနံှ့ သိရှိစေရန် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာမှာ IT နည်းပညာဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ''ဦးဇင်းတို့ ကျောင်းမှာက ကွန်ပျူ တာ တွေရှိတယ်။ သုံးလည်း သုံးနေရတယ်လေ။ ပြည်ပမှာM.A တို့ Ph.D တို့ သွားတက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းဦးဇင်း တွေဆီက ပို့ချချက် စာတွေ ကို သူတို့က မေးလ်နဲ့ပို့ လိုက်တော့ ဦးဇင်းတို့က ဒီမှာ ပြန်ဖွင့်ပြီး ဖတ်ရ တာ။ အခုလည်း ဒီပြပွဲ မှာ သြအနဘသသု တစ်လုံးလောက်လိုချင်လို့ လာဝယ်တာ။ ဒီမှာ အိတ်ဆောင် တိပိဋကဏ PocketPC ဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားလို့ ကြည့်နေတာ။ ဒီခေတ်မှာ က ဟိုတုန်းကလို ကျောင်း ထဲမှာပဲ စာဖတ်နေလို့မရတော့ဘူး။ IT ခေတ်ဆိုတော့ ဦးဇင်းတွေလည်း IT ဦးဇင်း တွေဖြစ်မှရမှာ'' လို့ ဝိသုဒ္ဓိ စာသင်တိုက် မှ ဦးသုမနက မိန့်ကြားခဲ့ တာပါ။ နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားကြ နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေဟာ တစ်နေ့တခြား ပိုမိုများပြား လာတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေဟာ အဲဒါတွေကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားလာ ကြပါတယ်။ ဒါ့ပြင် လူငယ်လူရွယ်လေးတွေဟာလည်း ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေ၊ အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာ အသစ်အဆန်းတွေကို စိတ်ဝင်တစား လေ့လာခဲ့ကြပါ တယ်။ အဲဒီလိုနည်းပညာ အသစ်အဆန်းတွေကို လေ့လာကြတဲ့ အတွက် လူငယ်တွေဟာ ဒီပြပွဲမှာနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ တိုးပွားခဲ့ပါတယ်။ ''ကျွန်တော်က အိမ်မှာ ဂိမ်းဆိုင် ဖွင့်ထားတယ်လေ။အင်တာနက်ဂိမ်း ပေါ့။ အခုလည်း ဒီပြပွဲမှာ ဂိမ်းအသစ် တွေ ဘာတွေ ထွက်ဦးမလဲလို့ လာကြည့်တာ။ နောက်ပြီး ဆိုင်အတွက် လိုအပ် တာလေးတွေလည်း ဝယ်လို့ရအောင်ပေါ့။ ဂိမ်းဆိုတာမျိုးက နေ့တိုင်း အသစ်တွေပဲ ထွက်နေတာ။ အခုတောင် ဒီပြပွဲ မှာ 3D Version နဲ့ ရုပ်ထွက်ကောင်း တယ်ဆိုတဲ့ Graphic Card အသစ်ရှိ တယ်ဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားလို့ လာကြည့် တာ။ နောက်ထပ်စက်အသစ်ဆင်ရင် ဒီD3D Version Graphic Card ဝယ်ပြီး ဆင်ရမယ်''လို့ ပြောပြသွားခဲ့သူက ဗဟန်းမြို့နယ်မှာ အင်တာနက်ဂိမ်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ကိုသူရအောင် ပါ။ ဘာကြောင့် ဈေးလျှော့ရသလဲ အခုပြပွဲမှာ လာရောက်ပြသတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ၊ ကွန်ပျူတာ ဆိုင်ကြီးတွေဟာ မထင်မှတ်နိုင်လောက်အောင် Discount တွေ ပေးပြီး ဈေးလျော့ရောင်းချပေးနေတာဟာ ပြည်သူတွေအတွက် အခွင့်အလမ်း တစ်ခုပါပဲ။ ယင်းကဲ့သို့ ဈေးလျှော့ရောင်းချခြင်းကြောင့် ပြည်သူများဟာ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ကို ရရှိခဲ့သလို ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် လည်း မိမိတို့၏ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများကို ပြည်သူအများ သိရှိစေတဲ့အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ရွှေလမင်းနဂါးကုမ္ပဏီမှ Service Manager ကိုပြည့်ဖြိုးဝင်းက ''အခုလိုမျိုး Laptop, Notebook, Netbook နဲ့ ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်း တွေကို ဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ Acer Brand ကို လူတွေ ပိုသိလာမယ်၊ နည်းပညာတွေ ကိုလည်း သိလာမယ်။ ရောင်းချသူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေသလို ဝယ်သူတွေအတွက် လည်း အဆင် ပြေစေတာပါ။ ပုံမှန် ဈေးထက် လျှော့ပြီး ဝယ်ရတဲ့ အခါကျတော့ ဝယ်သူကလည်း ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ရတယ်။ ရောင်းတဲ့သူကလည်း အရင်ကထက် ပိုပြီးရောင်းရတယ်။ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် အဆင်ပြေစေတဲ့ နည်းစနစ်တစ်မျိုးပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီပြပွဲကို လာရောက်ရောင်းချပြသတဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေ၊ အရောင်းဆိုင် တွေဟာ အခုလို Discount နဲ့ ရောင်းချပေးနေတာပါ'' လို့ ပြောပြ ခဲ့ပါတယ်။ မရှိမဖြစ် ITွှှု နည်းပညာတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုသည် ပြည်သူတို့၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို ဖော်ဆောင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းလုံးမှာ IT နည်းပညာတွေဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်နေတာကြောင့် နိုင်ငံ အတွင်းမှာလည်း ယခုထက် ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ရာမှာလည်း သတင်းအချက် အလက်နှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဟာလည်း အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ရပ်မှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ၂ဝရာစု နှောင်းပိုင်းကာလနဲ့ ၂၁ရာစု အကူး အပြောင်းကာလမှာ သတင်းဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ အရှိန်အဟုန်ပြင်းလာတာကို တွေ့ရှိနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်မပျက်ပြသလျက်ရှိခဲ့တဲ့ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာပြပွဲကြီးဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သလို နည်းပညာအသစ်အဆန်းများကိုလည်း ပြည်သူများ မြင်တွေ့သိရှိခွင့် ရခဲ့တဲ့အတွက် အကျိုးကျေးဇူးများ များ စွာ ဖြစ်ထွန်းခဲ့တာကို တွေ့ရှိရမှာပါ။ ဒါကြောင့် (၁၅)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ သတင်း အချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာပြပွဲကြီးမှသည် အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်း သော လူနေမှုဘဝဆီသို့ ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။ မယ်သီတာ
လက်ရှိကမ္ဘာ့နှမ်းဈေးကွက်ကို လေ့လာကာ မြန်မာ့နှမ်းများ ဈေးကွက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိအောင် ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာက တတိယနှမ်းအများဆုံး ထုတ်လုပ် ကမ္ဘာမှာ လူတစ်ဦး နှမ်းအများဆုံး စားသုံးမှုအနေနဲ့ ကိုရီးယားက ပထမနေရာမှာရှိပြီး ဂျပန်၊ တရုတ်တို့ ကလည်း ဒုတိယ အများဆုံး စားသုံးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံလူဦးရေ အနည်းအများအလိုက် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နှမ်းစားသုံးမှုက ကမ္ဘာမှာ အများဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။ မကြာသေးခင်က တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပ တဲ့ ကမ္ဘာ့နှမ်းညီလာခံမှာ တင်ပြတဲ့ အစီရင်ခံစာများအရ ကမ္ဘာ့နှမ်း ထုတ်လုပ်မှုကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံ များကတော့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ၊ ဆူဒန်၊ နိုက်ဂျီးရီးယား၊ အီသီယိုးပီးယား၊ တန်ဇန်းနီးယားနဲ့ မိုဇမ်ဘစ်တို့ဖြစ်ပြီး တရုတ်က အများ ဆုံးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက တတိယအများဆုံး ထုတ်လုပ်တဲ့ စာရင်းမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေထဲက ပြည်ပတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံ တွေက တော့ အိန္ဒိယ၊ ဆူဒန်၊ အီသီယိုးပီးယား၊ တရုတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုက်ဂျီးရီးယားနဲ့ တန်ဇန်းနီးယားတို့ဖြစ်တဲ့ အနက် အိန္ဒိယကတော့ တင်ပို့မှုအများဆုံးဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ တင်သွင်းနိုင်ငံများအနေနဲ့ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် စာရင်းအရ တရုတ်နိုင်ငံက တန်ချိန် ၃၁ဝဝဝဝ နဲ့ အများဆုံး တင်သွင်းခဲ့ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများက တန်ချိန် ၂၈ဝဝဝဝ၊ ဂျပန်က တန်ချိန် ၁၈၅ဝဝဝ နဲ့ တောင်ကိုရီးယားက တန်ချိန် ၁၃ဝဝဝဝ ဝန်းကျင်တင်သွင်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ တရုတ် နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာ နှမ်းအများဆုံး ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပေမဲ့ စားသုံးမှု များတဲ့အတွက် တင်သွင်းမှုမှာလည်း ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း စာရင်းဝင် ဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်နှမ်းတင်သွင်းမှု နှမ်းစားသုံးမှု ၊ တင်သွင်းမှု အများဆုံးစာရင်းဝင် ဂျပန်နိုင်ငံ ဟာ နှစ်စဉ်နှမ်းမျိုးစုံ တန်ချိန် ၁၅ဝဝဝဝ အထက် တင်သွင်းလျက် ရှိပါတယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတကာ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ မြင့် တက်ခဲ့ရာ ဂျပန်နိုင်ငံဆိပ်ကမ်း အရောက် တန်ဇန်းနီးယားနဲ့ မိုဇမ်ဘစ်နှမ်းဈေးဟာ တစ်တန်ကို ကန်ဒေါ်လာ ၂၇၅ဝ အထက်မှာ ရှိခဲ့ ပြီး၊ ပါရာဂွေး နှမ်းဖြူဈေးကလည်း တစ်တန်ကို ကန်ဒေါ်လာ ၃ဝဝဝ ကျော်ရှိခဲ့တာကြောင့် တန်ချိန် ၁၆၅ဝဝဝ သာ တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အလားတူ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာလည်း နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး အကြပ်အတည်းကြောင့် ဝယ်လိုအားနည်းပါးခဲ့တာကြောင့် တန်ချိန် ၁၆၄ဝဝဝ ကျော်တင်သွင်းခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂျပန် နိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံ က နှစ်စဉ်နှမ်းတန်ချိန် တစ်သောင်းဝန်းကျင် တင်ပို့ရာမှာ နှမ်းနက်ကို အဓိကတင်ပို့နေပါတယ်။၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဂျပန်နှမ်းဝယ်ယူရေးအစီအမံ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွက် တင်သွင်းမယ့်အစီအမံအနေ နဲ့ ဆီကြိတ်မဲ့နှမ်း တန်ချိန် ၈၅ဝဝဝ၊ နှမ်းဖြူ တန်ချိန် ၄၉ဝဝဝ ၊နှမ်းနက် တန်ချိန် ၁၄ဝဝဝ နဲ့ ရွှေရောင်နှမ်း တန် ၂ဝဝဝ၊ စုစုပေါင်း တန်ချိန် ၁၅ဝဝဝဝ ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ စုစုပေါင်း နှမ်းမိုျးစုံတင်သွင်းမယ့် တန်ချိန် ၁၅ဝဝဝဝ ကို မစ်ဆူဘီရှီ ၊ အိတိုချူ မစ်ဆူရီ၊ Kanenatsy နဲ့ စုမိတိုမို စတဲ့ ကုမ္ပဏီငါးခုက တင်သွင်း မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆီနှမ်းတင်သွင်းမယ့် တန်ချိန် ၈၅ဝဝဝ အနက် ဘာကီနာဖူဆို၊ နိုက်ဂျီးရီးယား၊ တန်ဇန်းနီးယားနဲ့ မိုဇမ်းဘစ်၊ ယူဂန်ဒါနဲ့ မာလီနိုင်ငံတို့က ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လ အတွင်း တန်ချိန် ၄၉၆၂ဝ တင်သွင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာသိရပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဝယ်ယူရေး အစီအမံအရ ဆီနှမ်းဝယ်ယူဖို့ တန် ချိန် ၃၅ဝဝဝ ခန့် လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ဝယ်လက်များ ဟာ မြန်မာ့နှမ်းကို တစ်တန် ကန်ဒေါ်လာ ၁၃ဝဝ အောက်ဈေးနဲ့ ဝယ်ယူလိုကြပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ က လက်ရှိဝယ်ယူနေတဲ့ တစ်တန် ၁၃ဝဝ နဲ့ ၁၅ဝဝ ဒေါ်လာ အတွင်ဈေးကို လိုက်မမီနိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ နှမ်းအများဆုံး တရုတ်က တင်သွင်း လက်ရှိ အခြေအနေအရ ကမ္ဘာမှာ နှမ်း အများဆုံး ထုတ်လုပ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဟာ ပြည်ပကို အနည်း အကျဉ်းတင်ပို့မှုရှိပေမဲ့ တင်သွင်းမှုမှာလည်းကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါ တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကရတဲ့စာရင်းများအရ ထုတ်လုပ်မှုအနေနဲ့ ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ မှာတန်ချိန် ၇ သိန်းထုတ် လုပ်ခဲ့ရာမှ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ မှာ တန်ချိန် ၄ သိန်းကို လျော့ကျခဲ့ပါတယ်။ တင်သွင်းမှုအနေနဲ့ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာတန်ချိန် ၃၁ဝဝဝဝ ထိ မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ ဇူလိုင်လအထိ တင် သွင်းမှု အနေနဲ့ တန်ချိန် ၂၁၂ဝဝဝ ကျော်ရှိပြီး အများဆုံး တင်သွင်းတဲ့ နိုင်ငံများနဲ့ ပမာဏကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်-နိုင်ငံ ဇွန်မှ ဇူလိုင် (တန်ချိန်)အီသီယိုးပီးယား ၁၂၈၃၂၅မြန်မာ ၂ဝ၉၃၅မာလီ(mail) ၁၅၉၃၈ဆူဒန် ၁၁၁၅၆ တရုတ်နိုင်ငံက နှမ်း တင်သွင်းရာမှာ အီသီယိုးပီးယား က အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဒုတိယအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အများဆုံး တင်သွင်းတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ဆီနှမ်းအဖြစ် အာဖရိက နိုင်ငံများမှ တင်သွင်းမှုများတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အာဖရိက နှမ်းကို အဓိကထားတင်ပို့ ကမ္ဘာမှာ အာရှ နိုင်ငံ တွေက နှမ်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု များတယ်ဆိုပေမဲ့ သီးနံှ အကြိုက် ရာသီဥတုရှိတဲ့ အာဖရိကနိုင်ငံ တွေအတွက် နှမ်းဟာအလွန် အရေး ပါတဲ့ သီးနံှဖြစ်တာကို သိရပါတယ်။ လက်ရှိ ကာလ အထိပိုးသတ်ဆေးနဲ့ ဓါတုဓါတ် မြေ သြဇာတွေ သုံးစွဲခြင်းမရှိသေး တာဟာလည်း အာဖရိကရဲ့ အား သာချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ အာဖရိက နိုင်ငံတွေမှာ အဓိက စိုက်ပျိုးတဲ့ဆီနှမ်းကို မေ၊ ဇွန်နဲ့ သြဂုတ်လတွေ အတွင်းရိတ်သိမ်းလေ့ ရှိပါတယ်။ အာဖရိက နိုင်ငံတွေ က နှမ်းအများဆုံး စိုက်ပျိုးတယ်ဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပဲမျိုးစုံအများဆုံး စိုက်ပျိုးသလို စားသုံးမှုနည်းပြီး အဓိကအားဖြင့် ပြည်ပတင်ပို့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဓိကတင်ပို့တဲ့ နိုင်ငံတွေ ကတော့ ဂျပန်၊ တရုတ်နဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံ တချို့တို့ဖြစ်ပါ တယ်။စိုက်ဧရိယာအမြင့်ဆုံးကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အရှေ့အာဖရိက အရှေ့အာဖရိကဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က နှမ်းစိုက် ဧရိယာတိုးတက်ကြီးထွားခဲ့ရာ လက်ရှိအချိန်ဟာ စိုက်ဧရိယာအမြင့်ဆုံး အတိုင်းအတာကို ရောက်ရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ မိုဇမ်းဘစ်နဲ့ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတွေမှာ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့် စိုက်ဧရိယာ အများဆုံး တိုးတက်ခဲ့ပြီး တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံ ကတော့ စိုက်ဧရိယာ ထပ် တိုးနိုင်တော့မယ့် အခြေအနေမရှိတော့ဘူး လို့သိရပါတယ်။ အထွက်နှုန်းအနေနဲ့ တစ်ဟက်တာကို ၆ဝဝ ကီလို ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ တောင်သူတွေဟာ နှမ်း တစ်မျိုးထဲကို အားထားခြင်း မရှိကြတော့ပဲ ဝါ၊ ပဲတီစိမ်းတို့လို အခြားသီးနံှတွေကိုလည်း စိုက်ပျိုးလာကြပြီလို့ သိရပါတယ်။အနောက်အာဖရိကလည်း စိုက်ဧရိယာ တိုးခဲျ့မှုငြိမ် အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် အနည်းငယ်အတွင်းက နှမ်းစိုက်ဧရိယာ ထူးထူးခြားခြား တိုးတက်ခဲ့ရာမှ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့ တိုးတက်မှု ငြိမ်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဆီနှမ်းအဓိကစိုက်ပျိုးပြီး အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင် ဘာလတွေမှာ ရိတ်သိမ်းတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ပြည်ပကို အများစု တင်ပို့ပြီး အဓိက အနေနဲ့ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ တူရကီနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံ တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထွက်နှုန်းအနေနဲ့ အရှေ့အာဖရိက ထက် ပိုပြီး တစ်ဟက်တာကို ၇ဝဝ ကီလို ထွက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခင်နှစ်ကတောင်သူတွေဟာ အခြား သီးနံှတွေထက် နှမ်းဈေးရတာ ပိုနည်းခဲ့တာကြောင့် ကာလတိုအတွင်းမှာ စိုက်ဧရိယာ ကျဆင်းနိုင် တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတာကို တွေ့ရပါ တယ်။အာဖရိကရဲ့ နှမ်းထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးနှစ်နိုင်ငံ အာဖရိကမှာ နှမ်း အများဆုံး ထုတ်လုပ်တဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ကတော့ ဆူဒန်နဲ့ အီသီယိုးပီးယား ဖြစ်ပြီး ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ မှာ အီသီယိုးပီးယားက တန်ချိန် ၂၂၅ဝဝဝ နဲ့ ဆူဒန်က တန်ချိန် ၁၆ဝဝဝဝ ထုတ် လုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံမှာလို နှမ်းဖြူ၊ နှမ်းနက်စတဲ့ အမိုျးအစားကွဲတွေ ရှိလာသလို ဆူဒန်နှမ်းဖြူ၊Gedaref ၊ အီသီယိုးပီးယား Humera ၊ Wollega စတဲ့အမျိုးအစားကွဲတွေ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ မုန့်ပဲ သားရေစာထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ နှမ်းတွေဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလမှာ ထွက်ရှိတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ တူရကီ၊ အီးယူ၊ တရုတ်၊ ဆော်ဒီ၊ အီဂျစ်၊ အစ္စရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ဈေးကွက်ကို မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အပြိုင်တင်ပို့တဲ့ နိုင်ငံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့ နှမ်းစိုက်ဧရိယာနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကို လေ့လာ မယ်ဆိုရင် ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ မှ ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွင်း တောင်သူ များက လူး ၊ ဆပ်နဲ့ မြေပဲတို့လို ငွေပိုရတဲ့ သီးနံှတွေကို ပြောင်းလဲ စိုက်ပိုျးလာကြတဲ့အတွက် နှမ်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု လျော့ကျခဲ့ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ မှာ မိုးရွာသွန်းမှုများတာကြောင့် အထွက်နှုန်း ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာ တော့ ရာသီဥတု ကောင်းမွန်ခဲ့တာကြောင့် အထွက်နှုန်းပိုမို လာလို့ ထွက်ရှိမှုလည်း ပြန်လည်တိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်နဲ့ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်အတွင်းမှာ အစိုးရရဲ့ နှမ်းစိုက်ဧရိယာ တိုးခဲျ့တဲ့ ကြိုးပမ်းမှု တွေကြောင့် နှမ်းထွက်ရှိမှု ၃ ဆနီးပါးအထိ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ ယင်းနှစ်တွေကစပြီး နှမ်းကုန်သွယ်မှု အမြောက်အမြား တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်နဲ့ အာဖရိကနှမ်း အလားအလာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ နှမ်းကို ဆီထုတ်ဖို့သာမက မုန့်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းပိုမိုသုံးစွဲလာခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်လိုအား တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ စိုက်ပျိုးသူများလည်း ပိုမိုစိုက်ပျိုးလာကြရာ အထူးသဖြင့် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြတဲ့ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယလို နိုင်ငံများက အထွက်လျော့ကျခြင်းက အာဖရိကနိုင်ငံတွေအတွက် စိုက်ဧရိယာ မြင့်တက်လာစေဖို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံကလည်း နှမ်း ဝယ်လိုအားများတာကြောင့် တင်သွင်းမှုအတွက် အခွန် သက် သာခွင့်ပြုလုပ်မှုတွေက အာဖရိကနှမ်းဈေးကွက် အတွက် အလာအလာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဆူဒန်ရဲ့ အချို့ဒေသတွေမှာ ပဲလိုအခြားသီးနံှတွေကို ပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးလာကြပေမဲ့ နှမ်းစိုက်ပျိုးမှုကလည်း အားကောင်း နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုက်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကတော့ နှမ်းစိုက်ပျိုးမှု တည် ငြိမ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အနောက်အာဖရိက တောင်သူများက တော့ နှမ်းစိုက်ပျိုးမှုကို စိတ်ဝင်စားမှုနည်းလို့ စိုက်ဧရိယာတိုးခဲျ့ဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆူဒန်အစိုးရဟာလည်း စားနပ် ရိက္ခာ ဖူလုံဖို့အတွက် လူး၊ ဆပ်၊ တို့ကို အနိမ့်ဆုံးထောက်ပံ့ ဈေးနှုန်းများပေးခြင်းနဲ့ ပိုစိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့အတွက် အချို့ တောင် သူများက နှမ်းအစားလူး၊ဆပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးလာ ကြတယ် လို့ သိရပါတယ်။ အီသီယိုပီးယားအစိုးရဟာ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ မှာ နှမ်းတန်ချိန် ၂၂၅ဝဝဝ ထိ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ဖို့ ရည်မှန်းထားပေမဲ့ တောင်သူတွေ နှမ်းစိုက် ဧရိယာခဲျ့ထွင်ဖို့ မရှိတာကြောင့် စိုက်ဧရိယာတိုးတက်မှာ မဟုတ်လို့ နှမ်းတန်ချိန် နှစ်သိန်းတော့ အမြဲထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားကြောင်း သိရပါတယ်။ လာမယ့်လများအတွက် နှမ်းဈေးကွက် အလားအလာ အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းဖွယ်ရှိပြီး ပါကစ္စတန်မှာ လည်း နှမ်းအထွက်အမြောက်အမြားကျဆင်းသလို အိန္ဒိယမှာလည်း မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် အထွက်ကောင်းဖွယ် မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ နှမ်းထွက်ရှိမှုဟာ မနှစ်ကထက် ၂ဝ-၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျဖွယ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရှေ့အာဖရိက နိုင်ငံတွေမှာ လည်း လက်ကျန်မရှိသလောက်ကုန်နေပြီဖြစ်ပြီး ဆူဒန်နဲ့ အီသီယိုပီးယားမှာ လက်ကျန်အနည်းငယ်ကျန်ရှိပေမဲ့ မနှစ်ကထက် လျော့ကျတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လများက တရုတ်က အဝယ်မရှိတာနဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ဥပုသ်ရာသီ ဖြစ်တာကြောင့် ဈေးငြိမ်နေပေမဲ့ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ နှမ်းအသစ်ထွက်ရှိ ရာသီတိုင်အောင် ဆီနှမ်းနဲ့ စားနှမ်း ရောင်းချမှုနည်းတာကြောင့် ဈေးမြင့်တက်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။အိန္ဒိယနှမ်း စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အိန္ဒိယ ဆီထွက်သီးနံှတွေဖြစ်တဲ့ ပဲပုပ်၊ မုန်ညှင်း၊ မြေပဲ၊ နေကြာ၊ နှမ်း၊ ပန်းနှမ်းစိုက်ပျိုးမှုကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာ စုစုပေါင်း တန်ချိန် ၂၄ ဒသမ ၁၁ သန်းထုတ်လုပ် နိုင်ခဲ့ရာကနေ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ မှာ မိုးရေမလုံလောက်လို့ ၂၂ ဒသမ ၉၆ သန်းကို ၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှမ်းစိုက်ပျိုးရာမှာ တော့ ရေအမြောက်အမြား မလိုအပ်တာကြောင့် ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ မှာ နှမ်းအထွက် ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ စက် တင်ဘာ ဒုတိယပတ်အထိ နှမ်းစိုက်ပျိုးမှုဟာ ဟက်တာ ၁ ဒသမ ၅၇ သန်းရှိလို့ ယခင်နှစ်ကာလတူ စိုက်ဟက်တာ ၁ ဒသမ ၃၉၉သန်း ထက် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ နှမ်းစိုက်ပျိုးတဲ့ ပြည်နယ်အားလုံးနီးပါးမှာ မိုးရေရရှိမှု အခြေအနေကောင်းနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တောင်သူများဟာ မုတ်သုန်မိုးအားကောင်းနေ တာကြောင့် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိတဲ့ ဝါ၊ ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်၊ ပဲမျိုးစုံ၊ မြေပဲနဲ့ ကြက်ဆူတို့လို သီးနံှတွေကို ပိုမိုစိုက်ပျိုးလာကြပါတယ်။ လက်ရှိမိုးအခြေအနေက ၂ဝ၁၁ အတွင်း နွေနှမ်း အထွက်တိုးဖို့ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေ နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ဆောင်း နှမ်းဖြူ ထုတ်လုပ်မှုအနေနဲ့ အကယ်လို့သာ ရာသီဥတု မှန်မယ်ဆိုရင် ယခင်နှစ်ထက် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးတက်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ပြည်နယ်အလိုက် နှမ်းဖြူထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်း ချက်တို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ပြည်နယ် ၂ဝ၁ဝ-၁၁ ၂ဝဝ၉-၁ဝဂူဂျာရတ် ၃၅ဝဝဝ ၆ဝဝဝဝရာဂျက်စသန် ၉၅ဝဝဝ ၇ဝဝဝဝအတ္တရာပရာဒေ့ရှ်နဲ့ ၁၆၅ဝဝဝ ၉၅ဝဝဝမဒ္ဒရာပရာဒေ့ရှ်အခြား ၄ဝဝဝဝ ၂၅ဝဝဝစုစုပေါင်း ၃၃၅ဝဝဝ ၂၅ဝဝဝဝအိန္ဒိယနှမ်းဈေးကွက် ဝေစု ကမ္ဘာမှာ နှမ်းအများဆုံးတင်ပို့နိုင်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ဝေစုရဲ့ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရယူထားပြီး အီသီယိုပီးယားက ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ၊ ဆူဒန်က ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ နိုက်ဂျီး ရီးယားက ၈ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းရယူကုန်သွယ်မှု ပြုနေပါတယ်။ ဆူဒန်၊ အီသီယိုးပီးယား အပါအဝင် အာဖရိက နှမ်းတင်ပို့မှုမှာ ကမ္ဘာ့နှမ်းတင်ပို့မှုရဲ့ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိနေပါတယ်။ အိန္ဒိယ နှမ်းတင်ပို့တဲ့ဈေးကွက်တွေက တောင်ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်၊ တရုတ်တိုင်ပေ၊ တရုတ်၊ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတွေအဓိကဖြစ်ပြီး၊ တောင်ကိုရီးယားဟာ အိန္ဒိယနှမ်း အများဆုံး တင်သွင်းတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ နှမ်းဈေးကွက်ဝေစု အနေနဲ့ တောင်ကိုရီးယားက ၁၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဒုတိယအများဆုံးကတော့ ဈေးကွက်ဝေစု ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတဲ့ အမေရိကန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာလည်း အိန္ဒိယနဲ့ ကုန်သွယ်မှု တိုးတက်နေတဲ့ အရေးပါတဲ့ ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်နေ ပါတယ်။အိန္ဒိယ နှမ်းတင်ပို့မှုက စားဆီတင်သွင်းမှုရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိ အိန္ဒိယနှမ်းဈေးကွက်ရဲ့ အဓိကပြိုင်ဖက်နိုင်ငံများကတော့ အီသီယိုပီးယား၊ ဆူဒန်၊ နိုက်ဂျီးရီးယား၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ မိုဇမ်းဘစ်၊ အခြားအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတို့ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အိန္ဒိယရဲ့ တစ်နှစ် နှမ်းမျိုးစုံစုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှုခန့်မှန်း တန်ချိန် ၆၇ဝဝဝဝ ရှိတဲ့အနက် တန်ချိန် ၂၅ဝဝဝဝ၊ (၃၆ ရာခိုင်နှုန်း နီးပါးခန့်) ပြည်ပတင်ပို့မှုရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နှစ်စဉ် စားဆီ တင်သွင်းမှုက တန်ချိန် ၈ သန်းခန့် ရှိတာကြောင့် နှမ်း အပါအဝင် ဆီထွက်သီးနံှတင်ပို့မှုဟာ စားဆီပြည်ပက တင်သွင်းမှုရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်း အောက်မှာပဲ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။အိန္ဒီယနှမ်းဈေးကွက်အလားအလာ လက်ရှိ အိန္ဒိယတောင်သူများ၊ ကုန်သည်များနဲ့ လှောင်လက်များဟာ ပျမ်းမျှ စီးပွားရေးအခြေအနေ တိုးတက်လာတာကြောင့် စားသုံးမှုနဲ့ ပြည်တွင်း သိုလှောင်နိုင်မှု မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယရဲ့ ဆီထွက် သီးနံှ စိုက်ဧရိယာတိုးတက်မှု တန့်နေပေမဲ့ အစိုးရ ကတော့ စိုက်ဧရိယာ တိုးတက်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လာမယ့် နှမ်းအသစ် ဈေးနှုန်းအလားအလာအနေနဲ့ တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ဝယ်လိုအား၊ အိန္ဒိယရဲ့ ရောင်းချနိုင်မှု တို့အပေါ် များစွာ တည်မီ နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာ့ငွေကြေးအပြောင်းအလဲ၊ စားနပ်ရိက္ခာ ဖောင်းပွမှုနဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အစိုးရအသီးသီးရဲ့ ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒတို့ကလည်း ဈေးနှုန်းဈေးကွက်ကို လွှမ်းမိုးစေတဲ့ အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံများနဲ့ အခြားဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများရဲ့ ဝယ် လိုအားကလည်း လာမယ့်ကာလအတွင်း စီးပွားရေး တည်ငြိမ်မှု အပေါ် မူတည်နေပြီး လာမယ့်နှစ် ၂ဝ၁ဝ-၁၁ အတွက် အိန္ဒိယနှမ်း ပြည်ပတင်ပို့နိုင်မှုကတော့ တန်ချိန် ၃ သိန်း နီးပါးရှိနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားပါတယ်။ ယခုနှစ်မှာ ရောင်းချမှုများတာကြောင့် လက်ကျန် ပမာဏ လျော့ကျဖွယ်ရှိပြီး အောက်တိုဘာလမှာ နှမ်းအသစ်များ ဈေးကွက် ဝင်ရောက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။မြန်မာ့နှမ်း စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှမ်းကို မိုးနည်းရပ်ဝန်းဒေသတွေ ဖြစ်တဲ့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသ ကြီးတို့မှာ အများဆုံး စိုက်ပျိုးကြပြီး ကျန်ဒေသတွေမှာလည်း အထိုက် အလျောက် စိုက်ပိုျးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နှမ်းအရောင် အမျိုးမျိုး ရှိရာ နှမ်းဖြူ၊ နှမ်းနီ၊ နှမ်းညို၊ နှမ်း နက်နဲ့ နှမ်းကြားဆိုပြီး ခွဲခြား ရောင်း ဝယ်ကြပါတယ်။ နှမ်းဖြူနဲ့ နှမ်းနက်ကို မုန့်များ၊ လက်သုတ်များ မှာ ထည့် သွင်း စားသုံးကြပြီး ကျန်နှမ်းများကို တော့ ဆီထုတ်ဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ဆီနှမ်းတွေထဲမှာ နှမ်းနီက ဆီပါ ဝင်မှု အများဆုံးလို့ သိရပါတယ်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစာရင်းအရ နှမ်းမိုျးစုံ စိုက် ပိုျး ထွက်ရှိ မှုတို့ကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်ခုနှစ် စိုက်ဧရိယာ အထွက်နှုန်း အထွက် (ဟတ်တာသန်းပေါင်း) (ကီလို/ဟက်တာ)၂ဝဝ၆-ဝ၇ ၁ .၄၄၃ ၄၇၉ ၆၉ဝ၁၇၉၂ဝဝ၇-ဝ၈ ၁ .၅၈၈ ၅၁၉ ၇၈ဝ၈၃၃၂ဝဝ၈-ဝ၉ ၁ .၅၆၉ ၅၄၄ ၈၅၃၇၃၆၂ဝဝ၉-၁ဝ ၁ .၆၃၅ ၅၃၁ ၈၆၇၈၆၇မြန်မာ့နှမ်း တင်ပို့မှုလျော့ကျ မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ ပြည်တွင်းစားသုံးဆီဖူလုံမှုရှိစေဖို့ ဆီနှမ်း ဖြစ်တဲ့ နှမ်းနီနဲ့ နှမ်းညိုတင်ပို့မ ခွင့်မပြုဘဲကျန်အခြားနှမ်း များကို တင်ပို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကတင်ပို့နှမ်းကတော့ သိပ္ပံ နှမ်းနက်လို့ ခေါ်တဲ့စမုံနက်၊ နှမ်းနက်နဲ့ နှမ်းဖြူတို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ နှမ်း ပြည်ပတင်ပို့မှုကို လေ့လာတဲ့အခါ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာ နှမ်း တန်ချိန် တစ်သိန်းကျော်တင်ပို့ခဲ့ တာမှာ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၆ဝ ကျော်ရရှိခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝမှာ နှမ်းအထွက် လျော့ကျခဲ့တာကြောင့် စုစုပေါင်း တန်ချိန် ၉ဝဝဝဝ ခန့်သာတင်ပို့နိုင်လို့ ကန်ဒေါ်လာ ၁၂ဝ သန်းကျော်ဖိုးပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်ထိ တန်ချိန် ၄၅ဝဝဝ ခန့်၊ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆ဝ ကျော်ဖိုး တင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။မြန်မာ့နှမ်းဈေးကွက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေး ကမ္ဘာ့နှမ်းစားသုံးမှုများတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ ဝယ်လိုအား၊ နှမ်းထုတ်လုပ်တင်ပို့နေတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်မှု၊ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲတွေကို လေ့လာ သိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာ စားနှမ်းရော ဆီနှမ်းပါ ဈေးကွက် ကျယ်ပြန့်နေ ဆဲဖြစ်နေဦးမယ်လို့ သုံးသပ်ရပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ နှမ်းစားသုံးမှု မြင့် တက်လို့ ဝယ်လိုအား တိုးတက်လျက်ရှိနေရာ ရိုးရိုးစားနှမ်းထက် ဆီ နှမ်းဝယ်လိုအားက ၃ ဆခန့်ပိုနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံအနေနဲ့ အစဉ်အလာကထဲက စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လာတဲ့နှမ်းကို ရရှိပြီးသားဈေးကွက်မပျောက်အောင်၊ ဈေးကွက်ခဲျ့ထွင်ပြီး တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်အောင် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ နေရာတော်တော်များများ ရယူထားတဲ့ အာဖရိက နှမ်းကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်နဲ့ ဘယ်လိုပြုပြင်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်ဆိုတာတွေကို ဂျပန် နိုင်ငံကို နှမ်းအများဆုံးတင်သွင်းနေတဲ့ အိတိုချူကုမ္ပဏီ ရန်ကုန်ရုံးခွဲ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ ဒေါက်တာ ဦးချစ်စိုးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပဲနှမ်းကုန်သည်များအသင်းရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ မောဥသျှောင်ကုမ္ပဏီရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးစိုင်ဘဉာဏ်တို့နဲ့ ကောမတ်စ်အဖွဲ့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနှမ်းနက်က ဈေးကွက်ထိပ်တန်းက ပြေးနေ စားနှမ်းတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်တဲ့ သိပ္ပံနှမ်းနက်ဟာ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာ ထိပ်ကပြေးနေ ပါတယ်လို့ အီတိုချူကုမ္ပဏီက ဒေါက်တာချစ်စိုးက ဆိုပါ တယ်။ နှမ်းနက်ကို တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်တို့မှာ စိုက်ပျိုးမှုရှိပေမဲ့ အိန္ဒိယ နှမ်းနက်က ဓါတုဓါတ်ြွကင်း ပါဝင်မှုကြောင့် နိုင်ငံတကာဝယ်လိုအား နည်းသလို ဗီယက်နမ်နှမ်းကိုလည်း ယခင်တစ်နှစ်က မှိုဆိပ် (afflatoxin ) ပါဝင်မှုကြောင့် တင်သွင်းမှု ပိတ်ခြင်းခံရတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ ထိုင်းကတော့ ထွက်ရှိမှုနည်းပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ကလည်း ပြည်တွင်းစားသုံးမှုအတွက် မလုံလောက်လို့ တင်သွင်းနေရဆဲမို့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ မြန်မာနှမ်းနက်ကို အားထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု နည်းသလို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံ၊ သိပ္ပံနှမ်း ဟာလည်း အရည်အသွေးကောင်းမွန်တာကြောင့် ဈေး နှုန်း အနေနဲ့လည်း အမြင့်ဆုံးကို ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဂျပန်နိုင်ငံက နှမ်းနက်ကို ဆေးဘက် ဝင်တဲ့ အနေနဲ့လည်း စားသုံးတယ်လို့ သိရပါတယ်။အထွက်နှုန်းမြင့်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့အာဖရိက နှမ်းဖြူကို ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ မြန်မာတို့ ကြိုးစားဖို့လို အာဖရိကမှာ စိုက်ပိုျးတဲ့ နှမ်း အများဆုံးက ဆီနှမ်းပဲ စိုက်ပျိုးပါတယ်။ ယခုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံက နှမ်းနက်ကို စမ်းသပ် စိုက်ပျိုးခဲ့ပေမဲ့ အောင်မြင်မှုမရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အာဖရိကနှမ်းဖြူနဲ့ မြန်မာနှမ်းဖြူ အဓိက ကွာခြားချက်တွေကတော့ ပထမ အချက်အနေနဲ့ အရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အာဖရိကနှမ်းက အဖြူရောင်သန့်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနှမ်းဖြူကတော့ အဝါရောင်သန်း တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ တရုတ်လို နှမ်းအများဆုံး စားသုံးသူတွေဟာ အလှအပကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ ဖြစ်လို့ အဖြူသန့်တဲ့ အာဖရိက နှမ်းကို ပိုကြိုက်ကြပါတယ်။ ဆီထွက်နှုန်းအနေနဲ့ အပူပိုင်းဖြစ်တဲ့ အာဖရိကနှမ်းကဆီထွက်ရှိမှု ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိလို့ အနည်းငယ်တော့လျော့ကျတယ်လို့ဒေါက်တာချစ်စိုးနဲ့ဦးစိုင်းဘဉာဏ်တို့ကဆိုပါတယ်။ အက်စစ်ပါဝင်မှုအနေနဲ့ အာဖရိကနှမ်းက ရိတ်သိမ်းချိန်မှာ အစိုဓါတ်နည်းတဲ့အတွက် ဝ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ပါဝင်မှုရှိပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဓိကအားဖြင့် မိုးနှမ်းများ ရိတ်သိမ်းချိန် အစိုဓာတ် များတဲ့အတွက် အက်စစ်ပါဝင်မှုဟာ ၁ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂ ရာခိုင်နှုန်း အထိပါဝင်တတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆောင်းနှမ်းနဲ့ နွေနှမ်းမှာ (ရေသွင်းနှမ်း) တော့ အက်စစ်ဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အထွက်နှုန်းကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အနောက်အာဖရိကမှာ တစ်ဟက်တာကို ၇ဝဝ ကီလိုထွက်ရှိပြီး အရှေ့အာဖရိကမှာ ကီလို ၆ဝဝ ထွက်ရှိကာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရဲ့ စာရင်း ဇယားများအရ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ မှာ ကီလို ၅၄၄ နဲ့ အမြင့်ဆုံးထွက် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နှမ်းကုန်သည်များရဲ့ ပြောကြားချက်အရ မနှစ်က မိုးခေါင်ပြီး အထွက်လျော့ကျခဲ့တာကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ပျမ်းမျှထွက်ရှိမှုဟာ တစ်ဟက်တာကို ကီလို ၄၈၄ ခန့်သာ ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အထွက်နှုန်းမြင့်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ အာဖရိကနှမ်းဖြူ ကို ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ မြန်မာ နိုင်ငံအနေနဲ့လည်း ကြိုးစားသင့် ကြောင်း ဦးစိုင်းဘဉာဏ်က ပြောကြားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ယခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပပို့ကုန်ဝင်ငွေ လဲလှယ်နှုန်း အပြောင်းအလဲ များခြင်းကလည်း ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေ ပါတယ်လို့လည်း ၎င်းတို့က ဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။ရှိပြီးသားပြည်တွင်းမျိုးကိုလည်း သန့်ပြီးတိုးခဲျ့စိုက်သင့် နှမ်းဖြူနဲ့ပတ်သက်လို့ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အထွက် ပိုမိုလာစေဖို့ ပြည်တွင်းရှိပြီးသားမျိုးထဲက သီးသန့်ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးသင့် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြည်ပမိုျးပြောင်းလဲစိုက်ပိုျးဖို့ဆိုတာ မိမိဒေသ ရေမြေနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ အကန့်အသတ် စိန်ခေါ်မှု အခက်အခဲများ နဲ့ အချိန်ယူရမှာဖြစ်လို့ ရှိပြီးသားမျိုးကောင်းကို တိုးခဲျ့စိုက်ပျိုးခြင်းက ပိုသင့်တော်တယ်လို့ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များက အကြံပြုကြပါတယ်။ တောင်သူအများစုဟာ ဈေးကောင်းတဲ့သီးနံှကို ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးတတ်တဲ့ အလေ့အထရှိပါတယ်။ နှမ်းဖြူသက်တမ်းက ၇၅ ရက်ရှိပြီး နှမ်းနီ၊ ညို သက်တမ်းက ၆ဝ-၆၅ ရက်ရှိတာကြောင့် နှမ်းဖြူဈေး ကောင်းမရတဲ့ နှစ်ဆိုရင် နှမ်းညို၊ နီ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးတတ်ကြပါ တယ်။ နီးစပ်ရာပတ်ဝန်းကျင်ယာခင်းများကလည်း နှမ်းဖြူစိုက်သူစိုက်၊ နှမ်းနီ/ညို စိုက်သူစိုက်နဲ့ အရောအနှောတွေ စိုက်တာမျိုးတွေကြောင့် ထွက်ရှိလာတဲ့နှမ်းတွေမှာ အရောင်သီးသန့်ရှိမနေတော့ဘဲ အရော အနှောဖြစ်ကာ အဖြူရောင်သန့်မနေတာပါလို့လည်း ဦးစိုင်းဘဉာဏ် က ဆိုပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ မျိုးသန့်ဖို့နဲ့ တကွင်းတပြင်မှာ မျိုးတူတာစိုက်ပျိုးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်လို့လည်း ထပ်လောင်း အကြံပြု ထားပါတယ်။ ဒေါက်တာချစ်စိုးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံက နှမ်းဖြူမျိုး သန့်ကိုရှာဖွေပြီး၊ မျိုးဗီဇမြင့်အောင် သုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့ လုပ် ဆောင်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုပြီး၎င်းတို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်း တတ် နိုင်တဲ့ဘက်က လိုအပ်တာများ ကူညီမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အထွက်ပိုမိုဖို့ အလေအလွင့်နည်းဖို့ အထူးဂရုပြုသင့် များသောအားဖြင့် တောင်သူတွေဟာ နှမ်းထောင်၊ နှမ်းခါတဲ့ အခါ မြေသလင်းကိုသာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ရိတ်သိမ်းေြွခလှေ့ချိန် မိုးရွာ၊ လေတိုက်မှုနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မိုျးမှာ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုဟာ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းအတွင်း ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ နှစ်စဉ်ကြုံ တွေ့နေရတယ်လို့ ဦးစိုင်းဘဥဏ်က ဆိုပါတယ်။ အကယ်လို့သာ မိုးကာနဲ့ နှမ်းထောင်၊ နှမ်းခါ လုပ်မယ်ဆိုရင် အလေအလွင့် ဆုံးရှုံးမှု လည်း နည်းမှာဖြစ်သလို အရည်အသွေးကောင်းလည်း ရရှိမှာဖြစ်လို့ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်လည်း သိသိသာသာ လျော့ကျသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းလို့ အက်စစ်ပါဝင်မှုလည်း လျော့ ကျသွားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ တောင်သူအများစုကတော့ အခုချိန်ထိ မိုးကာ ဝယ်ယူ သုံးစွဲမှုနည်းသေးတယ်လို့ရိတ်သိမ်းချိန်နောက်ပိုင်း မြန်မာ တောင်သူတွေရဲ့ နှမ်းကိုင်တွယ်မှု ဓလေ့များအားနည်းလျက်ရှိနေတာ ကို ထောက်ပြပါတယ်။ဈေးကွက်ရှိပြီးသား နှမ်းနက်ကို တိုးခဲျ့စိုက်သင့် ကမ္ဘာမှာ ထိပ်တန်းနေရာယူထားတဲ့ ဈေးကွက်ရှိနေပြီးသား နှမ်းနက်ကို လက်ရှိစိုက်ပျိုးနေတဲ့ အောင်လံဒေသလို အခြားရေမြေနဲ့ ကိုက်ညီနေတဲ့ ဒေသတွေမှာ တိုးခဲျ့စိုက်ပိုျးသင့်ပါတယ်လို့ ဒေါက်တာ ချစ်စိုးကလည်း အကြံပြုပါတယ်။ အာဖရိက အချို့ဒေသတွေမှာ နှမ်းနက်ကို စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးနေတဲ့ အနေအထားရှိလို့ ကမ္ဘာ့ဈေး ကွက်ကို တိုးမြှင့်တင်ပို့ဖို့ဆိုရင် နှမ်းအရည်အသွေးကို ရေရှည်ထိန်း သိမ်းဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အောင်လံဒေသ တောင်သူများဟာနှစ်စဉ်ဈေးကောင်းရတဲ့ နှမ်းနက်ကို စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်း တာဖြစ်လို့ အရည်အသွေးမှာ ထိပ်တန်းကရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြားဒေသတွေမှာလည်း မျိုးသန့်ကို စနစ်တကျ စိုက်ပျိုး သင့်ပါတယ်လို့လည်း ဦးစိုင်းဘဉာဏ်က ထပ်လောင်း ပြောကြားပါ တယ်။ရေသွင်းနှမ်းကို တိုးခဲျ့သင့် နှမ်းဖြူ၊ နှမ်းနီ/ညိုတို့ကို စိုက်ပိုျးရာမှာလည်း အရည်အသွေး အရကော၊ အက်စစ်ပါဝင်မှုနှုန်းအရပါ ကွာခြားတဲ့ ရေသွင်းနှမ်းကို တိုးခဲျ့သင့်ပါတယ်လို့လည်း ဦးစိုင်းဘဉာဏ်က အကြံပြုထားပါတယ်။ ရေကိုလိုသလောက် သွင်းနိုင်၊ ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက် အထွက်နှုန်းမှာ လည်း တစ်ဧက ၁၂ တင်းနှုန်း (တစ်ဟက်တာကို ကီလို ၇၂၆) ထိ ထွက်ရှိတာဖြစ်လို့ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ နေရာတိုင်း မျိုးသန့်ကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဝယ်လိုအားကောင်းတဲ့ ဆီနှမ်းများပြည်ပသို့ တင်ပို့သင့်၊ မသင့် ရှုထောင့်စုံက စဉ်းစားရန်လိုအပ် ကမ္ဘာဝယ်လိုအား သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ရှိနေတဲ့ ဆီနှမ်းများကို ပြည်ပတင်ပို့နိုင်အောင် တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် တောင်သူတွေ ပိုပြီး တွက်ခြေကိုက်မှာဖြစ်သလို၊ နှမ်းတင်ပို့မှုလည်း သိသိသာ သာမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်လို့ ဒေါက်တာချစ်စိုးက အကြံပြုပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း မန္တလေးကထိန်တော်အသင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကြီး ကတော့ ''တောင်သူရဲ့သဘောကိုက ဈေးကွက်မှာ ဝယ်လိုအားရှိပြီး၊ ဈေးကောင်းရတဲ့နှမ်းကိုပဲ ရွေးစိုက်တာပါ။ နှမ်းဖြူနဲ့နှမ်းနက်ကို ပြည်ပ တင်ပို့ခဲ့တဲ့အတွက် နှမ်းဖြူနဲ့ နှမ်းနက်တွေကိုပဲ ဈေးကောင်းရလို့တိုးပြီး စိုက်နေကြတာပါ။ နှမ်းညိုနဲ့နှမ်းနီက စုစုပေါင်းစိုက်ဧရိယာရဲ့ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှမ်းဆီကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲစားသုံးတဲ့ လူတန်းစားရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က နှမ်းညို၊ နှမ်းနီကို ပြည်တွင်းဆီစက်တွေနဲ့ ကြိတ်ခွဲတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းအတွက် ကြက်မွေးမြူရေးအစားအစာနှမ်းဖတ် ရနိုင်ပါ တယ်။ ပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ စားအုန်းဆီဈေးနှုန်းကို မယှဉ်နိုင်တဲ့ အတွက် ပြည်တွင်းက ဆီစက်လုပ်ငန်းတွေ ရှင်သန်ဖို့ အတော်ကြိုး စားနေရပါတယ်။ ပြည်တွင်းက နှမ်းဆီကိုပဲ စားသုံးတဲ့ လူတွေနဲ့ ဆီစက်သမားတွေအတွက် ဆီကြိတ်နှမ်း (နှမ်းနီ၊ နှမ်းညို) တွေကို ပြည်ပမပို့သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကလည်း ပြည်တွင်း ဆီဖူလုံဖို့အတွက် ဒီဆီကြိတ်နှမ်း (နှမ်းနီ၊ နှမ်းညို)ကို ပြည်ပတင်ပို့ဖို့ ခွင့်မပြုထားတာပါ''လို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ပိုင်း အနေနဲ့ကတော့ စားအုန်းဆီကို ဒေါ်လာသန်းရာကျော်ဖိုး တင်သွင်းနေရတာကြောင့်ဆီအုန်း တိုးခဲျ့စိုက်ပိုျးရေး၊ နှမ်းနှင့်ဆီနေကြာ တိုးခဲျ့စိုက်ပိုျးရေးကို ယခုထက် အရှိန်အဟုန်မြှင့်ပြီး ပြည်တွင်းစားသုံးဆီ ဖူလုံရေးကို ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆီနှမ်းများ ပြည်ပ တင်ပို့ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံက စဉ်းစားဆောင်ရွက် သင့်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်သူအသီးသီးရဲ့ အမြင်ရှုထောင့်မျိုးစုံက ဆွေး နွေးအကြံပြုတဲ့အပေါ်မှာ နောင်အနာဂတ်အတွက်ကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုနေပါတယ်။ ဈေးကွက်ထိန်းထားနိုင်ရေး ဓာတုဓာတ်ြွကင်း ကင်းစင်ဖို့လို ဈေးကွက်ရေရှည်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ ဓာတုဓာတ်ြွကင်း ပါဝင်မှုပြဿနာမရှိအောင်လည်း အထူးဂရုပြုသင့်ပါတယ်လို့ ဒေါက်တာ ချစ်စိုးက ဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။ မစိုက်ပျိုးမီ မျိုးအဖြစ်ကနေ စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းတင်ပို့တဲ့အထိ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဓာတုဓာတ်ြွကင်းများ ပါဝင်မှုမရှိအောင် တောင်သူတွေကို ပညာပေးသင့်သလို ပိုးသတ် ဆေး ရောင်းချသူများကိုလည်း လက်လွတ်စပယ်မဖြစ်အောင် စိစစ် သင့်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ဆွေးနွေးရရင် နှမ်းမျိုးကောင်း မျိုးသန့်တွေ တိုးခဲျ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သင့်သလို စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုတွေ၊ တိုးခဲျ့ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ အထွက်နှုန်းကောင်း ဖို့နဲ့ အာဖရိကနှမ်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်အောင် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ် လျှော့ ချနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ နည်းပညာတွေလည်း ရှာကြံဆောင်ရွက် သင့်ပါ တယ်။ ပြည်ပဈေးကွက်ဝယ်လို အား အလားအလာတွေ ကောင်း နေတာ သိနေရတဲ့အတွက် နှမ်းကိုလည်း ပဲ၊ ဆန်တို့လို အထူးပြု ကုမ္ပဏီများ ထူထောင်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါ တယ်။ အထူးပြုကုမ္ပဏီများထူထောင်ကာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရင် ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို မထိခိုက်စေဘဲ ပြည်ပသို့ နှမ်းတင်ပို့မှုကို တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်၏မူအရ လက်ရှိလူဦးရေ အတွက် သာမက ထပ်မံတိုးပွားလာမည့် လူဦးရေ သန်း ၁ဝဝ ထိ စားသုံးဆီ ဖူလုံဖို့ ရည်မှန်းဆောင်ရွက်နေတာကြောင့် လက်ရှိအနေအထားအရ ပြည်တွင်းဖူလုံရေးက အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ တိုးမြှင့်စိုက် ပျိုးထုတ်လုပ် ပြီး ဖူလုံမှုရှိမှ ပိုလံျှမှုကို နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင် မယ်ဆိုရင် ပြည်ပဝင်ငွေရကာ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်လာပါမယ်။ ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဈေးကွက်အတွင်းကယူပြီး ပြည်ပကို တင်ပို့ ရောင်းချနေမယ်ဆိုရင်လည်း ပြည်တွင်းဈေးမြင့်တက်ပြီး၊ စားသုံးသူ များကို ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောင်ရေရှည်ရည်မှန်း ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံရေး အတွက် တိုးခဲျ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဖို့လိုသလို ပြည်ပကိုလည်း တိုးမြှင့် တင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်လည်း သီးခြားအစီအစဉ် ချကာတိုးခဲျ့စိုက်ပျိုးဖို့လို ပါတယ်။ သေချာတဲ့အချက်ကတော့ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဦးချင်းစိုက်ပိုျးမှုကိုကြည့်ရင် အများစုက တောင်သူ လယ်သမားများ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စိုက်ပိုျးထုတ်လုပ်နေတဲ့ အဆင့်သာ ရှိတာကြောင့် စီးပွားဖြစ်အဆင့်စိုက်ပျိုးဖို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ တွေ့ ရပါတယ်။ လက်ရှိ တောင်သူလယ်သမား များရဲ့ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စိုက်ပျိုးမှုကနေ ပဲနှင့် စပါးအထူးပြုကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ နှမ်းအထူးပြု ကုမ္ပဏီများ ပေါ်ပေါက်စေဖို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ တစ်အုပ် တစ်မ စိုက်ပျိုးဖို့နဲ့ သီးခြားအရည်အသွေး တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ဖို့ စွမ်း ဆောင်ဖို့လိုအပ် ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာလည်း ဈေးကွက်ကို အထူးပြုကုမ္ပဏီများက လက်ဝါးကြီးအုပ်တာမျိုး မဖြစ်ရအောင်ဒေသခံနှင့် တောင်သူ၊ ကုန်သည်၊ ဆီစက်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ ှSupply Chain Mechanism အရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရင် ValueChain ကိုလည်း အကျိုးမျှတအောင် ထိန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံပဲ၊ နှမ်းကုန်သည်အသင်းလို အဖွဲ့အစည်းများက ဒါတွေကို ဦးဆောင်ပြီး၊ နှမ်းထွက်ရှိရာ ဒေသများမှာ အစုအဖွဲ့များ၊ အသင်းအဖွဲ့များနဲ့လည်းကောင်း၊ အထူးပြုကုမ္ပဏီ များနဲ့ လည်းကောင်း၊ နှမ်းဇုန်များထူထောင်ပြီး မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူ ဟာ အစီအမံတွေ စနစ်တကျချမှတ်ကာ နှမ်းနယ်ပယ်ကို တိုးတက် အောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်နှင့် အတူ လှုပ်ရှားလာတဲ့ ဈေးကွက် ဝါလကင်းလွတ်သီတင်းကျွတ်ကာလသို့ ရောက်ရန် ရက်သတ္တပတ်အနည်း ငယ်သာ လိုပါတော့တယ်။ ဝါကျွတ်ကာလ အချိန်အခါဟာ လူကြီးလူငယ် လူလတ် မရွေး စိတ်လှုပ်ရှားကြတဲ့ အချိန်အခါပါပဲ။ ဝါကျွတ်ကာလလို့ ခေါ်ကြတဲ့ သီတင်း ကျွတ် အခါသမယဟာသက်ကြီးရွယ်အိုများနဲ့ အမိအဖတို့ကို ကန့်တော့ကြတဲ့လ ဖြစ်လို့ မြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တိုင်းအတွက် အထွတ်အမြတ်ထားရာ အချိန် အခါလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို သီတင်းကျွတ်ကာလ နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှ စတိုးဆိုင်ကြီးတွေ၊ စူပါ မားကက်တွေဟာသူ့ထက်ငါအပြိုင်အဆိုင် သီတင်းကျွတ် ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေကို ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ အဲဒီလို ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေ ပြုလုပ်လာတဲ့အတွက် သီတင်းကျွတ်ကာလမှာ ကန်တော့ပန်းဆင်ကြတဲ့သူတွေမှာ အပြိုင်အဆိုင်ဈေးကွက် ထဲက မိမိကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းကို မိမိကြိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ လွတ်လပ်စွာနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး ကန်တော့လက်ဆောင်ပေးနိုင်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကိုအမှီပြုပြီး ကန်တော့လက်ဆောင်ပစ္စည်း ဈေးကွက် တွေလှုပ်ရှားလာသလို လူသုံးကုန်၊ စားသောက်ကုန်၊ အဝတ်အထည်နဲ့ အလှဆင် ပစ္စည်းတွေဟာလည်း အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါပြီ။လမ်းဘေး ဈေးသည်ကနေ စူပါ မားကက်တွေ၊ ဟိုက်ပါမတ်တွေအထိ ရာသီစာဈေးကွက်ကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ထိုးဖောက် ရောင်းချနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။စီးတီးမတ်နဲ့သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် စီးတီးမတ်မှာတော့ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်အတွက် ဈေးရောင်းပွဲတော် အဖြစ် လက်ဆောင်ခြင်းတွေကို အထူးအစီအစဉ် တစ်ရပ်အနေနဲ့ ရောင်းချပေးလျက်ရှိ ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ လက်ဆောင်ခြင်း တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းဟာ ကျပ် နှစ် သောင်း ငါးထောင်ကျော်မှ နှစ်သိန်းခုနစ်သောင်းကျော်အထိရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ လက်ဆောင်ခြင်းတွေအနက် ပြည်တွင်းပြည်ပက မုန့်မျိုးစုံနဲ့ သားရေစာများ ထည့်ထားသောခြင်းများကို ပိုမို ရောင်းချရကြောင်းကိုလည်း သိရှိရပါတယ်။စတားမတ်နဲ့လက်ဆောင်ခြင်း စတားမတ်မှာလည်း လက်ဆောင်ခြင်းတွေကို ဈေးနှုန်းလျှော့ ချပြီး ရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒဂုံစင်တာမှာ ရှိတဲ့စတားမတ် စူပါမားကက်မှာ သီတင်းကျွတ်ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို ကျင်းပနေတယ်။ ''ကျွန်တော်တို့ စတားမတ်မှာ ဒီသီတင်းကျွတ်ပွဲတော် အထူး ဈေးရောင်းပွဲ အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ လက် ဆောင်ခြင်းတွေ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ဥပမာ ၅ ခြင်းနဲ့ အထက် ဝယ် ယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်မြို့နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်တိုင်ရာ ရောက် လိုက်ပို့ပေး တဲ့စနစ်ကို ကျင့်သုံးထားပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ခြင်း ၁ဝဝ၊ ၂ဝဝ ယူမယ် ဆိုရင်တော့ ၃ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဈေးလျော့ပေးထားပါတယ်'' ''ဒီနှစ်သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်အတွက် ဈေးရောင်းပွဲမှာတော့ အခု အချိန်အထိ လက်ဆောင်ခြင်းတွေမှာ မုန့်မျိုးစုံနဲ့ သားရေစာ ထည့် ထားတဲ့ခြင်းတွေ ပိုပြီးရောင်းရတယ်။ ယမကာထည့်ထားတဲ့ ခြင်း တွေကတော့ကုမ္ပဏီကြီးတွေက ကန်တော့ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အခါမှာ ဝယ်ကြတာပါ။ အခုအချိန်အထိတော့ အဲဒါက သိပ် မရောင်းရသေးဘူး'' ''များသောအားဖြင့်တော့ မုန့်ပုံးတွေ ရောင်းနေရတယ်။ ကော်ဖီမစ်၊ မုန့်ဘူး၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ၊ ပုဆိုး၊ အချိုရည်၊ မီးဆိုင်း၊ မီးပုံးတွေ ရောင်းရပါတယ်။ မီးဆိုင်းတွေ မီးပုံးတွေကတော့ သီတင်းကျွတ်နား နီးရင် ပိုပြီးရောင်းရတယ်။'' ''မီးဆိုင်းကတော့ သူရဲ့အရည်အသွေးကောင်းရင် ကောင်းသလို ဈေးပေးရတယ်။ မီးပုံးကတော့ လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပိုက်ဆံ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေပဲ ဝယ်ကြတာ။ အိမ်မှာအလှဆင်ထားနိုင် အောင် လို့ပေါ့''ဟု ပြောပြခဲ့သူက စတားမတ်မှ မားကက်တင်းမန်နေဂျာ ဦးဇော်ဇော်အောင်ပါ။လူကြီးမိဘများအတွက် ကျန်းမာခြင်းလက်ဆောင် လူကြီး မိဘတွေအတွက်လည်း ကျန်းမာခြင်း ကန်တော့ လက် ဆောင်အဖြစ် ထုပ်ပိုးမှုပုံစံအသစ်နဲ့ ထုပ်ပိုးထားပြီး ရောင်းချ ပေးလျက် ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ''ဒါဟာ ဒီနှစ်မှစတဲ့ အစီအစဉ်အသစ်ပါ။ လူကြီးတွေများသော အားဖြင့် ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့နေတဲ့ လူကြီးမိဘတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ထားတာပါ။ ဒီအထုပ်ထဲမှာ Ensure အားဖြည့် အာဟာရမှုန့်က အဓိကပါပါတယ်။ ကျန်တာတွေကအချိုရည်၊ မုန့်၊ ဓာတ်ဗူး အဲဒါတွေ ထည့်ပေးထားတာပါ''လို့ စီးတီးမတ် အရောင်းဝန်ထမ်း တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့တာပါ။စီးတီးမတ်နဲ့ သီတင်းကျွတ် အထူးဈေးရောင်းပွဲတော် စီးတီးမတ်ရဲ့သီတင်းကျွတ် အထူးဈေးရောင်းပွဲတော်ကို အောက်တိုဘာလ ၇ရက်နေ့မှ ၂၇ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွား မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ အဲဒီဈေးရောင်းပွဲတော်မှာ ပစ္စည်းအမျိုး အစားပေါင်း ၁၅ဝကျော် ကို အထူးဈေးနှုန်းများနဲ့ ရောင်းချ သွားမှာဖြစ်ပြီး ဈေး ဝယ်ခွင့်ကတ်များကိုလည်း လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ကလေးငယ်များ အတွက်ကိုလည်း အထူးအစီအစဉ် တစ်ရပ် အနေနဲ့ အောက်တိုဘာလ ၂၂ရက်နေ့ မှ ၂၄ရက်အတွင်း သီတင်းကျွတ် အထူးလက်ဆောင်အဖြစ် သကြားလုံးများ၊ အရုပ်များ ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ကျင်းပနေတဲ့ စီးတီးမတ်ရဲ့ အထူးဈေးရောင်းပွဲတော်မှာ လက်ဆောင်ခြင်းတွေ၊ လက်ဆောင်လက်ဆွဲအိတ်တွေ၊ မုန့်ပုံးတွေ၊ မုန့်ဘူး တွေ၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ၊ ပုဆိုး၊ ကော်ဖီမစ်၊ အိုဗာတင်း၊ မိုင်လို၊ နက်စ် တွေအပြင် မီးပုံးတွေကိုလည်း ရောင်းချပေးလျက် ရှိနေတာကို တွေ့ရှိ ရပါတယ်။ လက်ဆောင်အိတ်တွေကတော့ ဒီနှစ်မှ စီတီးမတ်က ကိုယ်တိုင် တီထွင်ပြီး ချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး၊ လက်ဆောင် အိတ်အတွင်းက ပစ္စည်းတွေဟာ လူကြီးမိဘများကိုကန်တော့ဖို့ အကောင်းဆုံး သော ပစ္စည်းများဖြစ်တယ်လို့ စီးတီးမတ် အရောင်းဝန်ထမ်း တစ်ဦးရဲ့ ပြောပြချက်အရ သိရှိရပါတယ်။ လတ်တလောမှာ အရောင်းသွက်နေတာက လက်ဆောင်ခြင်း တွေ၊ မီးပုံးတွေ၊ လျှပ်စစ်မီးကြိုး၊ မီးဆိုင်းတွေ၊ ဖယောင်းတိုင်တွေ၊ ကော်ဖီမစ်တွေ၊ ဟော်လစ်တွေ၊ အိုဗာတင်းတွေ၊ မိုင်လိုတွေပါပဲ။ ပုဆိုးတွေလည်း လူကြီးသူမတွေကို လှူဖို့အဝယ်များကြောင်း တာဝန် ရှိသူ တစ်ဦးကပြောပါတယ်။ '' မနှစ်က အရောင်းသွက်ခဲ့တာက လက်ဆောင်ခြင်းတွေပါပဲ။ ဖယောင်းတိုင်တွေလည်း အရောင်းသွက်တယ်။ သာမန်ပုံစံတွေထက် လှပတဲ့ဒီဇိုင်းဆန်းတဲ့ဟာတွေ ပိုရောင်းရတယ်။ဘုရားပူဇော်ဖို့မီးပုံး လှလှလေးတွေ မီးဆိုင်းတွေလည်း အရောင်းသွက် တယ်။မုန့်မျိုးစုံ လည်း အရောင်းသွက်ခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်လည်း ဒီပစ္စည်းတွေပဲ အရောင်း သွက်မှာပါ''လို့ အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ထပ်မံပြောပါတယ်။ ပြည်တွင်းဖြစ် မီးပုံးတွေအရောင်းသွက်သလို ပြည်ပကမီးပုံးတွေ လည်း အဝယ်လိုက်နေကြောင်း ဈေးကွက်အတွင်းမှ သိရပါတယ်။ ပြည်တွင်းဖြစ်တွေက တစ်ဒါဇင် ၅ဝဝ ကျပ်ကနေပြီးအမျိုးမျိုးရှိသလို ပြည်ပဖြစ်တွေကလည်း တစ်လုံး ၂၅ဝဝ ကျပ်ကနေ ၄၅ဝဝ ထိ ရှိ ပါတယ်။သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် သီးသန့်မလုပ်တော့တဲ့ စိန်ဂေဟာ စိန်ဂေဟာ စူပါမားကက်ကြီးကတော့ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ရယ် လို့ သီးခြားမလုပ်တော့ဘဲ စိန်ဂေဟာ (၆)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဈေးရောင်းပွဲတော် ကို အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှ ၂၃ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ''ကျွန်မတို့ စိန်ဂေဟာစူပါမားကက်အနေနဲ့ သီတင်းကျွတ် ပွဲတော်ရယ်လို့ သီးသန့်မလုပ်တော့ဘဲ စိန်ဂေဟာ (၆) နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ရောပြီး လုပ်သွားမှာပါ။ ကျင်းပမယ့်ရက်ကလည်း သီတင်းကျွတ်ကာလနဲ့တိုက်နေတော့ သိပ်ပြီးမထူးတော့ ဘူး ပေါ့။ အဲဒီ ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာ ကုမ္ပဏီအသီးသီးကို ဖိတ်ကြားပြီး သူတို့ ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့၊ တင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်း တွေရောင်းနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပါ'' လို့ စိန်ဂေဟာစူပါမားကက်မှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးရဲ့ပြောပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။ကယ်ပီတယ်ဟိုက်ပါမတ်နဲ့ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် သီတင်းကျွတ်ကာလကိုရောက်ပြီဆိုရင် စူပါမားကက်တွေ၊ ဟိုက်ပါမားကက်တွေဟာ ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေကို အပြိုင်အဆိုင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီလို ဈေးပွဲတော်တွေ အပြိုင်အဆိုင်ပြုလုပ်ကြတဲ့အတွက် ဈေးဝယ်သူတွေဟာ သီတင်းကျွတ်ကန်တော့ လက်ဆောင်တွေကို အပြိုင်အဆိုင်နဲ့ ရောင်းသူတွေကြားမှာ ဈေးနှုန်း သက်သာစွာနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင် တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကယ်ပီတယ်ဟိုက်ပါမတ်က ''အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်ကနေ ၂၅ ရက်နေ့အထိသီတင်းကျွတ် အထူးဈေးရောင်း ပွဲတော် ကျင်းပမယ်။ လက်ဆောင်ခြင်းတွေကို အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ လဆန်းကတည်း က ရောင်းပေးနေတယ်။ လိုချင်တဲ့ပုံစံလည်းလုပ်ပေးတယ် ဖျော်ဖြေ ရေး အစီအစဉ်တွေလည်းရှိတယ်။ လက်ဆောင်တွေလည်း ပေး မယ်။ သီတင်းကျွတ် ဆီမီးပူဇော်ဖို့ ဖယောင်းတိုင် ပုံစံအသစ် တွေလည်း တင်ထားတယ်။ ပြည်ပက ဝင်လာတဲ့ မီးကြိုးမီးပုံးတွေ၊ပြည်တွင်းထုတ်တွေလည်း ရောင်းချ ပေးနေတယ်'' လို့ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ကက်ပီတယ်ဟိုက်ပါမတ်မှအရောင်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ''ကျွန်မတို့ ကယ်ပီတယ်ဟိုက်ပါမတ်မှာ ခါတိုင်းနှစ်တွေ လိုပဲဈေးရောင်းပွဲတော်ကို ကျင်းပနေပါတယ်။ စူပါ မားကက်တွေ၊ ဟိုက်ပါ မားကက်တွေ အခုလို အပြိုင်အဆိုင် ရောင်းချကြတဲ့ အတွက် ဈေး ဝယ်သူတွေ အခွင့်အလမ်း ပိုရတာပေါ့။ အခု သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်မှာ အရောင်းရဆုံးက မုန့်ပုံးပါ။ လက်ဆောင်ခြင်းကတော့ အခုအချိန် သိပ် မရောင်းရသေးဘူး။ ဒီမှာက စက်မှုဇုန်နဲ့နီးတော့ သီတင်းကျွတ်နားနီးရင် ယမကာပါတဲ့ လက်ဆောင်ခြင်းကပိုပြီးရောင်းရတယ်။ မုန့်ပါတဲ့လက်ဆောင် ခြင်းကတော့ အခုလည်း ရောင်းနေရတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သီတင်းကျွတ်နားနီးရင် ပိုပြီးရောင်းရတယ်။''''နောက် ဒုတိယအရောင်းရဆုံးက ကော်ဖီမစ်၊ နောက် အချိုရည်၊ မုန့်ဘူး၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ၊ ပုဆိုး၊ဒါတွေပဲ အများ ဆုံး ရောင်းရတာ။ ကျန်တဲ့ ဓာတ်ဘူးတို့၊ ဖန်ခွက်တို့၊ ပန်းကန် တို့ကတော့ မင်္ဂလာဆောင် လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းမျိုးဆိုတော့သီတင်းကျွတ် ပြီးမှ ရောင်းရတာ'' ''အခုဆိုရင် ကလေးတွေ လာဝယ်ကြတာများတယ်။ ဆရာ/ဆရာမတွေကို ကန်တော့ဖို့ဆိုပြီးဝယ်ကြတာ။ ကလေးတွေက သူတို့ အကြိုက်ဝယ်ကြတာ။ မိဘတွေက ပိုက်ဆံရှင်းပေးရုံပဲ။ သူတို့ ဆရာမ အကြိုက်သူတို့ပဲသိတာ ဆိုတော့ သူတို့ စိတ်ကြိုက်ဝယ်ကြတာနေမှာ'' လို့ ပြောပြ ခဲ့ပါတယ်။ဒဂုံစင်တာ သီတင်းကျွတ် အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ လက်ဆောင်ခြင်းတွေ ကို အမျိုးမျိုး လုပ်ထားတယ်။ လုပ်ထားတာကိုမကြိုက်ရင် လည်း လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့အသစ်လုပ်ပေး တယ်။ဝန်ဆောင်ခမယူဘူး။ဒဂုံ စင်တာအနေနဲ့ ဝါကျွတ်ကာလဂါရဝလို့ အမည် ပေးထားတဲ့ လက် ဆောင်ခြင်းတွေ ကို နှစ်လဆက်တိုက် ရောင်းချပေးမယ်။ သီတင်း ကျွတ် ပွဲတော်ရက်မှာ မြန်မာမုန့်တွေကို အထူး အစီအစဉ် အနေနဲ့ ရောင်းမှာ ဖြစ်တယ်။အဝတ်အစားတွေကို ဆိုင်ခန်း ၇ဝ ကျော်က အထူးဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချ ပေးမယ်။ အလှကုန်တွေလည်း အတူတူပဲ။ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်တွေလည်း လုပ်ပေးသွားမယ်။ သီတင်းကျွတ် လက်ဆောင်တွေလည်းပေးဖို့ရှိတယ်။ ဒဂုံစင်တာ လာရင် လက်ဆောင်ရရင်ရ၊ မရရင် ပညာရစေချင်တယ်။မီးပုံးတွေ မီးဆိုင်းတွေလည်း သီတင်းကျွတ်အတွက် အထူး ဈေးနှုန်းနဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ ရောင်းချ ပေးနေတယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။သစ်သီးဝလံပန်းမန်ရောင်းသူတွေလည်းပျော် သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်တိုင်၊ သြင်္ကန် အစရှိတဲ့ပွဲတော်ရက် တွေမှာ အခါတိုင်းထက် ပိုရောင်းရလို့ သီတင်းကျွတ်အမီ ဝယ်သူ အကြိုက် အသီးတွေရဖို့ နယ်ကိုကြိုတင်မှာနေကြောင်း သီရိမင်္ဂလာ ဈေးမှ သစ်သီးရောင်းသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ သီတင်းကျွတ်ဆို ဘုရားကပ်ဖို့၊ ရဟန်းသံဃာ လှူဖို့၊ လူကြီးသူမ ကန်တော့ဖို့ အသီး တွေ အဝယ်များတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ပုံမှန်ထက် အများကြီးပိုရောင်းရ တယ်။ ဒါကြောင့် လူကြိုက်များတဲ့ အသီးတွေ ဝါကျွတ်မရောက်ခင်ရက်နဲ့ တိုက်ပြီး ကိုယ့်လက်ထဲ ရောက်အောင် မှာထားရတယ်လို့ ၎င်းက ထပ်မံပြောပါတယ်။ ပန်းသည်တွေ ကလည်း သီတင်းကျွတ်လပြည့် အမီပန်းမျိုးစုံ ရရှိဖို့ ပန်းခြံတွေကို ကြိုတင် မှာနေကြောင်း သိရပါတယ်။တက္ကစီသမားတွေလည်း သီတင်းကျွတ်ကိုမျှော် သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကို မျှော်လင့်ပြီး စီးပွား ရှာနေသူတွေထဲမှာ တက္ကစီသမားတွေလည်း ပါပါတယ်။ ''တက္ကစီတွေ များလာတော့အရင်ကလို့ ဆွဲမကောင်းဘူး။အထူး ယာဉ်လိုင်းတွေကလည်း အများကြီးထွက်လာတယ်။ ရုံးတက်ချိန်နဲ့ ညပိုင်းပဲ လူရတယ်။ သီတင်းကျွတ်ဆိုရင် လူတွေက ဘုရားသွားကြ၊ လည်ကြ၊ပတ်ကြတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ လိုင်းကားထက်စာရင်တက္ကစီစီး ကြတယ်။ သာမန်ရက်တွေမှာ တစ်ရက် နှစ်သောင်း၊ နှစ်သောင်းခွဲ ကျပ်လောက်ရရင် သီတင်းကျွတ်ရက်မှာ လေးသောင်း ၊ ငါးသောင်း ရနိုင် တယ်လို့ တက္ကစီ မောင်းသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ရင်ခုန်နှုန်းမြန်စေတဲ့ သီတင်းကျွတ် သီတင်းကျွတ်ကာလကို ရောက်ပြီဆိုရင် ရင်ခုန်နှုန်းမြန်လာသူ တွေအများအပြားပါ။ သီတင်းကျွတ်ရင်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ရင်ခုန်နေကြ သူ တွေထဲမှာ မင်္ဂလာမောင်နံှတွေလဲ ပါဝင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာမောင်နံှတို့ထက်ပိုပြီး ရင်ခုန်ရသူ တွေကတော့ ဆွေမျိုးအင်အား တောင့်တင်းတဲ့ သူတွေပါပဲ။ ဦးကြီး၊ ဒေါ်ကြီး၊ ဦးလေး၊ ဒေါ်လေး၊ ဦးလတ်၊ ဦး ငယ် အဒေါ်ငယ်ပါမကျန် ကန်တော့ကြရဦး မှာမို့ ရင်ခုန်သံတွေ မြန်နေတာကတော့ အိမ်ထောင်ဦးစီးများပါပဲ။ ''ကျွန်တော့်မှာဗျာ မိန်းမဘက်က ဆွေမျိုးတွေက ပိုများတယ်။ သူ့ဖက်ကို ပိုပြီး ဦးစားပေးရမှာဆိုတော့ ကြီးဒေါ်တစ်ယောက် ကို ၅ဝဝဝ လောက် သတ်မှတ်လိုက်ရင် ၅ယောက် ဆိုရင်ပဲ ၂၅ဝဝဝ ဖြစ်နေပြီ။ အခုလည်း ဒီစီးတီးမတ်မှာ သီတင်းကျွတ် ဈေးရောင်းပွဲ တော် လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ အိမ်က သမီးနဲ့အတူ လာကြည့်တာ။ ဘာနဲ့ ကန်တော့ ရင်ကောင်းမလဲလို့၊ ဈေးလဲသက်သာ၊ အမြင်လည်းလှ၊ မိန်းမဘက်က အမိုျးတွေလည်း ကြည်ဖြူမယ့် ပစ္စည်းမျိုးကို လာရှာတာ''ပါလို့ ပြောပြခဲ့တဲ့သူက စမ်းချောင်းမှာနေတဲ့ ဦးခင်မောင်ဝင်းပါ။ ဝါကျွတ်ပွဲတော်ဆိုတာ မြန်မာတွေရဲ့ လေးစားမြတ်နိုးရတဲ့ ပွဲတော်ပါပဲ။ ရှေးယခင်က ငှက်ပျောသီး၊ အုန်းသီးနဲ့ ရိုးရာမုန့် တွေနဲ့သာ ကန်တော့ခဲ့ကြပေမဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်စနစ်နဲ့လူနေမှု ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့အတူ ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာတော့ ဝါကျွတ် ပွဲတော်နဲ့အတူ ပေါ် ပေါက်လာတဲ့ ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေဟာ စီးပွားရေး အခွင့် အလမ်း တွေကို ဖော်ဆောင် လို့ နေပါပြီ။ ရိုးရာအစဉ်အလာ ဓလေ့ကို ထိန်း သိမ်းရင်း နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကိုပါ အထောက် အကူဖြစ်စေမယ့်ဝါကျွတ် ဈေးရောင်းပွဲတော်များကို ကြိုဆိုအပ်ပါကြောင်း။ မယ်သီတ။လွင်လွင်မိုး
ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ တွင်ကျယ်စွာ နေရာယူရင်း ပြည်ပဈေးကွက်သို့ မျှော်မှန်းလျက်ရှိသည့် မြန်မာ့စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူ ပြည်တွင်းစားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းတွေဟာလည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် သမား ရိုးကျထုတ်လုပ်နေရာကနေ သွင်းကုန်အစားထိုးအဖြစ် ထုတ်လုပ်လာသလို ပြည်ပဈေးကွက်အထိ တင်ပို့နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းလုပ်ကိုင်လာကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေထဲက ပြည်တွင်းမှာ အောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နေတဲ့ အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်လုပ်ငန်း၊ ကော်ဖီမစ်၊ တီးမစ် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ အချိုရည် လုပ်ငန်း၊ ပေါင်မုန့်၊ ကိတ်မုန့်လုပ်ငန်းနဲ့ စည်သွပ်လုပ်ငန်းတွေကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ''စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတချို့ တိုးတက်လာတယ်၊ အရင်သမားရိုးကျ ထုတ်လုပ်တာထက် ခေတ်မီနည်းပညာတွေနဲ့ စနစ်တကျ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ထုတ်လုပ် လာတာတွေ့ရတယ်၊ တချို့လည်း ပြည်တွင်းကနေ ပြည်ပဈေးကွက်အထိ တိုးခဲျ့လာကြတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိစေသလို ပြည်ပထွက်ငွေလည်း လျှော့ကျစေတယ်''လို့ စိုက်ပျိုးရေး အခြေခံစားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်သူများအသင်းကတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ပြည်တွင်း စားသုံးသူအများစုကလည်း ပြည်ပကဝင်လာတာတွေနဲ့ အရည်အသွေးတူရင် ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး လပ်ဆတ်တဲ့ ပြည်တွင်းထုတ်တွေကိုပဲ စားသုံးကြကြောင်း၊ ပြည်ပထုတ်ပစ္စည်းတချို့ကို လူတန်းစားတစ်ရပ်ကသာ စားသုံးကြောင်းစားသောက် ကုန်မျိုးစုံရောင်းချသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ အသင့်စားခေါက်ဆွဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲတွေ နာမည်အမျိုးမျိုး၊ ပုံသဏ္ဍန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေပေမယ့် အဲဒီအသင့်စားခေါက်ဆွဲကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်က တရုတ် (တိုင်ပေ)မှာ ဂျပန်လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မိုမိုဖူကူအန်ဒိုဆိုတဲ့သူက စတင်တီထွင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အန်ဒိုဟာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲကို သူပိုင်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ နီဆန်းစားသောက်ကုန် ထုတ် လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကနေ ဈေးကွက်အတွင်းကို ၁၉၅၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က စတင်ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နီဆန်းကုမ္ပဏီဟာ ယခင်က အဝတ်အထည်များကို ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲ ကို စတင်ဖြန့်ချိခဲ့စဉ်က Chikin Ramen ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ဖြန့်ချိခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက် ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ Cup Noodle ကို စတင်ထုတ်လုပ်ပြီး ဈေးကွက်အတွင်း ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ အသင့်စားခေါက်ဆွဲဈေးကွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခေါက်ဆွဲဈေးကွက်မှာ ယခင်က ရိုးရိုးခေါက်ဆွဲ ခြောက်တွေသာ နေရာယူခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အသင့်စားခေါက်ဆွဲ တွေ နေရာယူလာပါတယ်။ အရင်ကတော့ ပြည်ပကဝင် လာတာတွေ ကိုပဲ စားသုံးခဲ့ကြပြီး ယခု ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်မှုတွေရှိလာပါတယ်။ ပြည်တွင်းထုတ်တွေက ပြည်ပကဝင် ရောက်လာတာတွေထက် ဈေးနှုန်း သက်သာပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေအကြိုက် ထုတ်လုပ်ထားတာ ကြောင့် ပြည်တွင်းထုတ် အသင့်စားခေါက်ဆွဲတွေ ဈေးကွက်မှာနေရာရခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အခုတစ်ခါ ဈေးကွက်ထဲမှာ နေရာရလာတာက အသင့်စား ဘူးခေါက်ဆွဲပါ။ နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေး ထည့်စရာပါ အသင့်ရှိလို့ အရောင်းသွက်လာကြောင်း အရောင်းဆိုင်များက ပြောပါတယ်။ နီပွန်နိုဒယ်ဘူးခေါက်ဆွဲတွေ ထုတ်လုပ် ရောင်းချ နေတဲ့ ငုရွှေဝါ ကုမ္ပဏီလီမိတတ်မှ စက်ရုံမန်နေဂျာဦးကျော်ဝင်းက ''အရင်က ပြည်တွင်းမှာ ဒီလိုဘူးခေါက်ဆွဲတွေ မရှိဘူး။ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ စင်္ကာပူ စတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ ရှိတာကြာပြီ။ ဒါကြောင့်ပြည်တွင်း မှာ စက်ရုံထောင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကစက်တွေနဲ့ ဂျပန်နည်းပညာသုံးပြီး ထုတ်တယ်။ ခေါက်ဆွဲတစ်မျိုးတည်း ပြည်တွင်းကသုံးတယ်။ ပုဇွန်နဲ့အခြားရောစပ်တဲ့ ကင်မ်ချီ၊ အရွက်နဲ့အနံ့၊ အရသာတွေ ဂျပန်က တင်သွင်းပြီး ထုတ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် တခြား ခေါက်ဆွဲ တွေနဲ့မတူဘဲ ဈေးနည်းနည်းမြင့်တယ်။ ခေါက်ဆွဲထည့်တဲ့ဖော့ဘူးကအစ ဂျပန်စက် နဲ့ ပြည်တွင်းစက်ရုံမှာပဲ ထုတ်တယ်။ အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှု နည်းစနစ်နဲ့ နိုင်ငံတကာစံချိန်အတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားတယ်''လို့ ပြောပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကနေ မကြာမီ ကြက်သားကင်မ်ချီ၊ ပုစွန်တုန် ယမ်း၊ ကြက်သားတုန်ယမ်းစတဲ့ အရသာရှိတဲ့ ခေါက်ဆွဲ ဘူးတွေ ထပ်မံ ထုတ်လုပ်ပြီး စားသုံးသူဈေးကွက်ကို ဖြန့်ချိမယ်လို့ သိရတယ်။ဒါ့အပြင် ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ အခြားနိုင်ငံကြီးတွေကို ပြန်လည်တင်ပို့ဖို့ စီစဉ် နေကြောင်း ထပ်မံသိရပါတယ်။ ယင်းစက်ရုံမှ တစ်ရက် ၈ နာရီ အလုပ်ချိန်အတွင်းမှ ဘူးခေါက်ဆွဲ ၅ဝဝဝဝ ခန့် ထုတ်လုပ်နိုင်ပေမယ့် ဈေးကွက် လိုအပ်ချက်အရ လတ်တလောမှာ ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ ''ပြည်တွင်းထုတ်ခေါက်ဆွဲတွေထဲမှာတော့ ယမ်ယမ်က ရောင်း အား အတက်ဆုံးဖြစ်ပြီး ဘူးလိုင်းမှာတော့ နီပွန်က ဒီလပိုင်းမှာ အရောင်းသွက်လာတယ်။ ှStar Mart မှာတော့ ပြည်တွင်းထုတ်နဲ့ ပြည်ပထုတ်ရောင်းအားမျှနေတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ ပြည်ပထုတ်က အနည်းငယ်မြင့်ပေမယ့် သူ့အကြိုက်နဲ့ သူရှိပါတယ်'' လို့ Star Mart မှ အရောင်း တာဝန်ခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ''အသင့်စားခေါက်ဆွဲဈေးကွက်မှာ ပြည်တွင်းထုတ်တွေပဲ အရောင်းပိုသွက်တယ်။ ဒါကလည်း နေရာအနေအထား ပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ အမတို့ Capital မှာတော့ ပြည်ပထုတ်ခေါက်ဆွဲ စားသုံးသူ နည်းတယ်''လို့ Capital Hypermart မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က ပြောပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ဒုတိယပတ်ထဲ ရန်ကုန်မြို့ကို လာရောက်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဒေသက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အချို့က လည်း ယမ်ယမ်ခေါက်ဆွဲစက်ရုံကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါ တယ်။ ကိတ်မုန့်၊ ပေါင်မုန့် စားသောက်ကုန်ဈေးကွက်ထဲမှာ နေရာယူနေတဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုး ကတော့ ကိတ်မုန့်၊ ပေါင်မုန့်၊ ကွတ်ကီး အစရှိတာ တွေပါပဲ။ ကလေး ငယ်တွေနဲ့ လူကြီးတွေအကြိုက် သားရေစာအဖြစ်စားသုံးကြတာပါ။ ပြည်တွင်းထုတ်၊ ပြည်ပထုတ် တံဆိပ်မျိုးစုံနဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာရှိပါတယ်။ မုန့်မျိုးစုံထုတ်လုပ်ရာမှာ ကိုယ့်ဒေသရဲ့ ထွက်ကုန်တွေအသုံးချ ပြီး ကိုယ့် လူမျိုးအကြိုက် အရသာထုတ်လုပ်နိုင်မှ ပြည်တွင်းဈေးကွက် ရရှိနိုင်သလို ကိုယ်တင်ပို့ရောင်းချမယ့်နိုင်ငံရဲ့ အကြိုက်နဲ့ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း တင်ပို့မယ်ဆိုရင် ပြည်ပဈေးကွက်ပါရရှိမယ်လို့ A&Tအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီလီမိတတ်မှ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ဒေါ်တိုးတိုးမြင့်က ပြောပါတယ်။ ''အစ်မကပြည်ပနိုင်ငံတွေ အများကြီးသွားပြီး ခေတ်မီ မုန့်ဖုတ်နည်းပညာကို သင်ကြားခဲ့တယ်။ အခုလည်းလိုအပ်ရင်ပြည်ပကပညာရှင် ခေါ်ပြီးသင်ယူတယ်။ စက်တွေကတော့ အနောက်နိုင်ငံက စက်တွေပဲ။ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ထုတ်လုပ်တော့ ပြည်တွင်းမှာ နေရာရသလို ပြည်ပဈေးကွက်လည်း ရတယ်။ မုန့်ပဲလှော်နဲ့ မီနီဘာဂါကို စင်္ကာပူကို တစ်နှစ်ကွန်တိန်နာ(၅) လုံးလောက် ပို့ရတယ်'' လို့ ဒေါ်တိုးတိုးမြင့်က ထပ်မံပြောပါတယ်။ A&Tကုမ္ပဏီဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်က စက်မှု(၁)ဝန်ကြီးဌာန၊ စား သောက်ကုန်လုပ်ငန်းနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကုန်ကြမ်းပေး ကုန်ချောယူ စနစ် နဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါလုပ်သားအင်အား ၂ဝဝခန့်နဲ့ မုန့်မိုျးစုံထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်က မုန့်မျိုးစုံ ရောင်းသူ တစ်ဦးကတော့ ''မုန့်တွေ ထဲမှာ ပြည်တွင်း ဖြစ်တွေက ပိုရောင်းရတယ်။ ပြည်ပက လာတဲ့မုန့်တွေက ဈေးနှုန်းနည်းနည်း မြင့်တယ်။ အများစုကတော့ ပြည်တွင်းဖြစ်ပဲစားကြတယ်။ ကိတ်မုန့်၊ ပေါင်မုန့်၊ ကွတ်ကီးတွေဆို ပြည်တွင်းကပြန်လဲလို့ရတယ်။ ပြည်ပထုတ်ကလဲလို့မရဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာ ပြည်တွင်း ဖြစ်ပဲ အရောင်းများတယ်''လို့ ပြော ပါတယ်။ အချိုရည်ဈေးကွက် အချိုရည်ဈေးကွက်မှာ ယခင်က ပြည်ပထုတ်တွေသာရှိခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်တွင်းအချိုရည်ထုတ် စက်ရုံတွေက အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်လာတာကြောင့် အချိုရည်ဈေးကွက်ရဲ့ ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြည်တွင်းထုတ် ကသာ နေရာယူနေကြောင်းညောင်ပင်လေးဈေးမှ အချိုရည်မျိုးစုံရောင်းချသူတစ်ဦးက ပြောပါ တယ်။ ပြည်တွင်း အချိုရည်ဖျော်ရည် ဈေးကွက်မှာ နေရာရနေတဲ့ Happy Myanmar မှမန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်သောင်းက''ဖျော်ရည်စထုတ်တုံးက ၆ မျိုး ထုတ်ခဲ့တယ်။ အခု ၉ မျိုးထုတ်တယ်။ စက်ကတော့ တရုတ်စက်ပဲ၊ နည်းပညာက အိမ်တွင်းစက်မှု လက်မှုနည်းပညာပဲ၊ အနံ့၊ အရသာနဲ့ ကြာရှည်ခံပစ္စည်းတွေကတော့ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလန်၊ တရုတ်ကမှာတယ်။ သကြား ကတော့ ပြည်တွင်း ဖြစ်ပဲ သုံးတယ်။ QC ထားပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းအောင် ထုတ်လုပ် တယ်။ မကြာခင်မှာ တစ်ခါသုံးဘူးသေးတွေ၊ Juice တွေ၊ အရသာသစ် တွေထပ်ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်'' လို့ပြောပါတယ်။ ရာသီဥတုပူပြင်းလာမှုကြောင့် အချိုရည်ဈေးကွက်ဟာ တဖြည်းဖြည်း လိုအပ်ချက် မြင့်တက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းအချိုရည် ထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ အရည်အသွေးမီ တိုးမြင့် ထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက် ရယူရမှာဖြစ်သလို ပြည်ပကို တိုးခဲျ့တင်ပို့ဖို့လို အပ်ကြောင်း ဈေးကွက်လေ့လာသူတွေက ပြောပါတယ်။ ကော်ဖီမစ်နဲ့ တီးမစ် လူအများ ကော်ဖီမစ်လို့ အလွယ်တကူခေါ်နေကြတဲ့Instant Coffeeကို ၁၉ဝ၁ ခုနှစ်မှာ ဂျပန်လူမျိုး ဆာတိုရီကာတိုက တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ကာတိုဟာ အမေရိကန်ချီကာဂိုမြို့မှာ အလုပ် လုပ်နေတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကာတိုဟာ Instant Coffee ကို စတင်တီထွင်ခဲ့ပေမယ့် ဈေးကွက်အတွင်းကို ဖြန့်ချိခြင်း မပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကာတိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ Instant Coffee ကိုGeorge Constant Lousis Washington က သူရဲ့မူပိုင်အဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၁၉၁ဝ ခုနှစ်အရောက်မှာ ဈေးကွက် အတွင်းကို စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က Instant Coffee ကို စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးခဲ့တာကြောင့် ထင်သလောက် မအောင်မြင် ခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်မှာတော့ Nescafe ဆိုတဲ့ တံဆိပ်နဲ့ ဈေးကွက် အတွင်းကို ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ လူအများ အကြိုက် တွေ့မယ့်အရသာကို ပြန်လည် ပြုပြင်ထားတာကြောင့် လူကြိုက်များ လာခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ Instant Coffee ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အချိန်တိုကာလအတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး သော ဈေးကွက်ဝင်ပစ္စည်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ပြည်တွင်းစားသုံးသူဈေးကွက်မှာ နေရာယူနေတာကတော့ ကော်ဖီမစ် တီးမစ်တွေပါပဲ၊ အရင်ကတော့ အမှုန့်တွေကို နို့ဆီ၊ သကြား၊ ရေနွေးစတာတွေနဲ့ ရောစပ်ဖျော်သောက်ခဲ့ကြတာပါ။ အခုတော့ ရေနွေးရှိရုံနဲ့ အသင့်သောက်သုံးနိုင်တဲ့ ရယ်ဒီမိတ် အထုပ် တွေပဲ ရောင်းအားရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ လဘက်ရည်သောက်ချင်ရင် ဆိုင်ထိုင်ကြတဲ့ ဓလေ့ရှိနေတာ ကြောင့် လဘက်ရည် ထုတ်တွေထက် ကော်ဖီမစ်ထုတ်တွေပို ရောင်းရ တယ်လို့ စူပါဝမ်း ကော်ဖီမစ်ထုတ်လုပ်ရေးမှ စက်ရုံမှူး ဦးခင်မောင်လှိုင် က ပြောပါတယ်။ ''စူပါဝမ်း ကော်ဖီမစ်ကို ၂ဝဝဝ ခုနှစ်ကတည်းက ထုတ်ခဲ့တာ၊ ဂျပန်စက်နဲ့ထုတ်တာပဲ။ စထုတ်ချိန်က ၂ဝဝ၃ ခု နှစ်အထိ ရောင်း အား ကောင်းခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာဈေးကွက်ထဲကို ပြည်တွင်း ထုတ် ပြည်ပထုတ် မျိုးစုံဝင်လာတော့ ယှဉ်ပြိုင်မှုများတယ်။ ဘရာဇီးက ကော်ဖီမှာတယ်။ မလေးက ကော်ဖီမှုန့်သုံးတယ်။ Refined Sugar သုံးတယ်။ ၂ဝဝ၉ မှာ တီးမစ်ထုတ်ခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့ တဲ့နှစ်လကစပြီး ၅ဝ ကျပ်တန် Birthday ထုတ်ခဲ့တယ်။ အများက ၅ဝ ကျပ်တန်ကော် ဖီမစ်တွေထုတ်နေတော့ ကိုယ်လဲအရသာ အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် ထုတ်လိုက်တာပဲ။ Quality က မလျော့ပါဘူး''လို့ ပြောပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက်ဒေသက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်များနဲ့ စီးပွားရေးတွေ့ဆုံပွဲမှာလည်း စူပါဝမ်းကော်ဖီမစ်တွေကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ တင်ပို့ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြည်တွင်းထုတ်ကော်ဖီမစ်တွေ အမျိုးမျိုးရှိပေမယ့် Premier ကတော့ အရောင်းရဆုံးစာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးကပါပဲ။ ပြီးတော့ ထိုင်း နိုင်ငံက ထုတ်တဲ့ Birdy က အရောင်းရဆုံးပဲ။ တတိယ လိုက်တာ ကတော့ Rice ပါပဲ။ လက်ဖက်ရည်ထဲမှာဆိုရင်တော Royal Myanmarတီးမစ်၊ Tea Master တွေ အရောင်းသွက်တယ်လို့ Satr Mart က တာဝန်ခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ တာမွေမြို့နယ်မှ အိမ်ရှင်မတစ်ဦး က ''ကျွန်မတို့အိမ်မှာ ကော်ဖီမစ်က အကြိုက်မတူတော့ တံဆိပ်သုံးမျိုးလောက် ဝယ်ရတယ်။ Premier ရယ်၊Rice ရယ်၊Tea Mix ရယ် ဝယ်ရတယ်။ ပြည်တွင်းထုတ် တွေကိုပဲ ဝယ်တာများတယ်''လို့ ပြောပါတယ်။ စည်သွပ်ဘူးများ အသင့်စားသောက်ကုန်တွေထဲမှာ ငါးစည်သွပ်ဘူးတွေလည်း အရောင်းသွက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အထက်မြန်မာ ပြည်ဘက်မှာ ပိုမိုရောင်းရကြောင်း ဈေးကွက်အတွင်းမှ သိရပါတယ်။ ဈေးကွက်အတွင်း မှာပြည်ပထုတ်တွေနဲ့အပြိုင် ပြည်တွင်းထုတ်တွေ လဲ နေရာယူနေပါတယ်။ Myanmar MAKRO Industry Co.,Ltd ကလည်း ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို ငါးစည်သွပ်ဘူးနဲ့ အခြားစည် သွပ်ဗူး တွေထုတ် လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ဈေးကွက်ခဲျ့ပြီး ပြည်ပတင်ပို့ ဖို့အတွက် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ''ငါးကို Value Added လုပ်ပြီး ရောင်းတော့ ဈေးပိုရတာပေါ့။ ထိုင်းက နည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်တာ၊ စက်ကဂျပန်စက်ပဲ၊ ပညာရှင် တွေက မကြာခဏလာရောက်သင်တန်းပေးတယ်။ ဘူးခွံကတော့ပြည်ပ က အလွယ်တကူဖွင့်လို့ရတာမှာခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ရောင်း အားတက် လာတယ်'' လို့ MAKRO ကစက်ရုံမှူးဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ အဆိုပါစက်ရုံကနေ နှစ်စဉ်စည်သွပ်ဘူး သုံးသိန်းခန့်ထုတ်လုပ် နေပြီး ငရုတ်ဆီ ပုလင်းမျိုးစုံနဲ့ ဘာလချောင်ကြော်တွေလည်း ထုတ်လုပ်လျက် ရှိပါတယ်။ ငါးသေတ္တာဘူးမှာ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပဲငပိပါတဲ့ဘူးတွေ ပိုရောင်းရ တယ်၊ ပြည်တွင်းထုတ်ဆိုတော့ မြန်မာ လူမျိုး တွေ အကြိုက် အရသာ လည်းဖြစ်တယ်၊ ဈေးနှုန်းသက်သာတာလည်းပါတယ်၊ ပြည်ပထုတ် တွေက ဈေးကြီးပြီးအကြိုက် မတူဘူး၊ ပြီးတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေက စည်သွပ်ဘူးစားတဲ့အလေ့အထ နည်းတယ်၊အရေးပေါ်တစ်ခါတစ်လေ စားတာမျိုး ပဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့် စည်သွပ်ဘူး အရောင်းအဝယ်က လောလောဆယ် အနေအထားအရ အေးတယ်''လို့ Star Mart မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ပြည်တွင်းစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း တိုးတက်နေတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အလား အလာ လည်းကောင်း တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အရေးကြီးတာကတော့ စားသုံးသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်ငန်း ရေရှည်ရှင်သန် အောင်မြင်ဖို့အတွက် အန္တရာယ်ကင်းပြီး စံချိန်စံညွှန်းမီတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေ ဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ ဈေးကွက် စီးပွားရေးပိုမိုဖြစ်ထွန်း လာတာနဲ့အတူ စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းလည်း အခုထက်ပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့ ယုံကြည် ပါတယ်လို့ စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးသိန်းမြင့်ဝေက ပြောကြားပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးကို လက်မလွတ်နိုင်သေးတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ကုန်ကြမ်းအတိုင်း ရောင်းရတဲ့အဆင့်ကနေ ပြည်ပ ကနည်းပညာနဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ကိရိယာတွေ တင်သွင်းပြီး တန်ဖိုး မြှင့် ထုတ်ကုန်တွေ ထုတ်လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းရင်း အရင်က ပြည်ပတင်သွင်းရတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေနေရာမှာ အောင်မြင်စွာ အစားထိုးရောင်းချနိုင်တာဟာ မြန်မာစားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းရဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒါ့အပြင် အရင်းအနှီးတွေ တိုးခဲျ့ပြီး ပြည်ပဈေးကွက်ကို တင်ပို့နိုင်အောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေတာ တွေ့မြင်နေရတာကြောင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်း တွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်သ လို့ ပြည်သူတွေရဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ပွင့်လန်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အနာဂတ် ကာလမှာ ရင်ဆိုင်ကြရမယ့် အာဆီယံ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု ဒေသ တရုတ်အာဆီယံနဲ့ အိန္ဒိယအာဆီယံ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ် မှုဒေသများရဲ့ စိန်ခေါ်မှုများအတွက်လည်း အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင် ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
၂ဝ၁ဝ အတွင်း ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နံှမှုအတွက်လာရောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာမှ ဧည့်သည်များ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကစပြီး ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး စီးပွားရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်မှာမရှိသေးတဲ့ အရင်းအနှီးနဲ့နည်းပညာတွေ၊ ကျွမ်းကျင်သူ တွေကို ပြည်ပကဖိတ်ခေါ်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နံှလုပ်ကိုင် စေဖို့အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ဦးတည်ချက်(၄)ရပ်မှာ''ပြည်တွင်းပြည်ပမှအတတ်ပညာနင့်အရင်းအနှီးများဖိတ်ခေါ်၍စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးးတက်ေ်အောင် တည်ဆောက်ရေး'' ဆိုတဲ့ ဦး တည်ချက်တစ်ရပ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ပြည်ပက ရင်းနှီးမြုပ်နံှသူတွေ လုပ်သာကိုင်သာ ရှိမယ့်၊မက်လုံးတွေရှိမယ့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြူပ်နံှမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ် လိုအပ် တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြူပ်နံှမှုဥပဒေ ( The Union of Myanmar Foreign Investment Law )ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့ကပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာ ပြင်ပရင်းနှီးမြူပ်နံှမှုဟာ အရေးပါတယ်။ ယနေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်ပနိုင်ငံ ၃ဝ ကျော်က ကဏ္ဍကြီး ၁၂ခုမှာ ရင်းနှီးမြူပ်နံှမှု ၄၃၆ ခုနဲ့ တန်ဖိုးအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၆၅၃ဝကျော်ဖိုး ရင်းနှီးမြူပ်နံှထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကို ရင်းနှီး မြုပ်နံှမှုစီးဝင်တာတွေ နည်းနေသေးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြူပ်နံှသူတွေဆိုတာကလည်း စီးပွားရေး သမားတွေဆိုတော ့ကိုယ်ရင်းနှီးမြူပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေဘယ်လောက် တည်ဆောက်ထားပြီးပြီလဲ၊ ဘယ်လောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပြီလဲဆိုတာကို ကြည့်ကြတာပါ။သူတို့လိုချင်တဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေရှိမှ လာရောက်ရင်းနှီးမြူပ်နံှဖို့ စိတ်ကူးကြတာပါ။ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံး တဲ့အချိန်ကစပြီး၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နံှမှု ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားကဏ္ဍ၊ လမ်းတံတားအခြေခံ အဆောက်အအုံကဏ္ဍ၊ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်းနဲ့ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၊ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ တွေအပါအဝင် ကဏ္ဍစုံမှာဘဏ္ဍာငွေ အမြောက်အမြားသုံးစွဲပြီး အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခြေခံ အဆောက်အအုံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တည်ဆောက်ပြီး တည်ဆောက်ဆဲနဲ့ အနာဂတ်အခြေအနေတွေကို ကောမတ်စ် ဂျာနယ်အတွဲ (၁ဝ)အမှတ် (၃၄)မှာ ရေးသားခဲ့ပြီးပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ကျင်းပမဲ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီး အပြီးထွက်ပေါ်လာမဲ့ အစိုးရ အသစ်တစ်ရပ်က ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ဆက်လက်ဖော်ဆောင်ရာမှာ အဓိကကျတဲ့နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြူပ်နံှမှုများပိုမို စီးဝင်လာရေးအတွက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြူပ်နံှမှုများကို ဆွဲဆောင်ဖိတ်ခေါ်မယ်လို့ ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များက ယူဆလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်မှာအကောင်အထည်ဖော်မဲ့ အာဆီယံ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းအရ ရင်းနှီးမြူပ်နံှမှုများလွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းကြတော့မှာ ဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပေါြွကယ်ဝတဲ့ သယံဇာတနဲ့ မဟာဗျူဟာအရ အချက်အချာကျတဲ့တည်နေရာကြောင့် ပြည်ပက ရင်းနှီးမြူပ်နံှသူတွေ မျက်စိကျနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦး တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းတွေအပေါ် မပြတ်လေ့လာစောင်ကြည့်နေကြတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအပါအဝင် စက်မှုနိုင်ငံကြီးများက ရင်းနှီးမြူပ်နံှမှုနဲ့ ကုန်သွယ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့အစိုးရဌာနတွေ၊ စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေ၊ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်မှု တိုးတက်များပြားလာတာကို သတိထားစောင့်ကြည့်မိရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ လယ်ထိ ပြည်ပမှကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြူပ်နံှမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေ လာရောက်မှုကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ထိုင်းနိုင်ငံက (၅) ကြိမ်၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက (၄) ကြိမ်၊ တရုတ်နိုင်ငံက(၃) ကြိမ်၊ မလေးရှား၊ ကိုရီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှ (၁) ကြိမ်စီ အသီး သီးလာရောက်ခဲ့ပြီး လူဦးရေ အားဖြင့် ၈ဝဝ ကျော်ခန့် လာရောက်ခဲ့တာကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်ရဲ့ မှတ်တမ်းများအရ သိရပါတယ်။ ဒီလိုလာရောက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ အဖွဲ့သီးသီးနဲ့ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များအကြား ကုန်သွယ်မှုနဲ့ရင်းနှီးမြူပ်နံှမှု တိုးမြင့်ရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့တာတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကအများဆုံးလာရောက် ထိုင်းနိုင်ငံကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် Thailand Board of Investment အဖွဲ့၊ Institute ofAsian Studies Chualalong University အဖွဲ့၊Department of Industrial Promotion Federation အဖွဲ့၊Trade & Investment Promotion Departmentof Thai Industries အဖွဲ့ Departmentof Foreign Trade Thai Ministry of Commerce eJU Kanchanburi Province တို့မှဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ စီးပွားရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို (၅)ကြိမ် လာရောက်ခဲ့ကြပြီး၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်း၊ စက်ယန္တရား၊ အဝတ်အထည်၊ ဟိုတယ်နဲ့ spa သုံးပစ္စည်း၊ အိမ်သုံး၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်မဲ့ နေရာကို သွားရောက်ခဲ့သလို Thailand Board of Investment (BOI) Institute of Asian Studies Chualalong University မှလာရောက်တဲ့ အဖွဲ့ဟာဆိုရင် ရန်ကုန်-နေပြည်တော်သာမကဘဲ မန္တလေး - မူဆယ် အထိ ကားနဲ့သွားခဲ့ပြီး လေ့လာခဲ့ကြသလို ရန်ကုန် နဲ့ မန္တလေးမှာရှိတဲ့ စက်မှုဇုန်များကိုလည်း သွားရောက်လေ့လာမှု ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုကို ကြည့်ရင် ပင်လယ်ရေကြောင်း နဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု နှစ်ရပ်အပေါ် ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ဘဏ္ဍာနှစ်က ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ နီးပါး ရှိခဲ့ရာကနေ၂ဝဝ၉ -၂ဝ၁ဝ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ ၃ ဒသမ ၅ဘီလီယံ ကျော် ကိုတိုးတက်ခဲ့တာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကုန်သွယ်နေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ ပို့ကုန်ပိုင်းမှာ ရေထွက်ပစ္စည်း၊ ခနောက်စိမ်း၊ ကော်ဖီမစ်၊ ဘိုကိတ်ပဲ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ ရေချိုပုစွန်၊ ပဲတီစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ သစ်ခေါက်၊ ရော်ဘာခွဲသား၊ သစ်မာခွဲသားတို့ဖြစ်ပြီး အများဆုံး သွင်းကုန်တွေကတော့ဘိလပ်မြေ၊ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီ၊ PVC ပိုက်၊ နို့ဆီနို့စိမ်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်က ဒုတိယအများဆုံးလာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များက ဒီနှစ်အတောအတွင်း (၄) ကြိမ်လာရောက်ခဲ့ပြီး ဒုတိယ အများဆုံးလာရောက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ Vietnam Trade & Investment Mission, Hochimin City Investment & Trade PromotionCentre ဟနွိုင်းလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ ဟိုချီမင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း Tourist Corporation တို့မှ အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း ၂၅ဝ ဦးခန့် လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အလူမီနီယမ်လုပ်ငန်း၊ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ၊စတီးနဲ့ သံကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်း၊ စားသောက်ကုန်နဲ့ အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်း၊ ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး စက်မှုပစ္စည်းများ၊ အလှကုန်များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ ဗီယက်နမ် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများကတော့၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကန်ဒေါ်လာ ၄၈ သန်း ကျော် ရှိခဲ့ရာက၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကန်ဒေါ်လာ ၈၂ သန်းကျော်ထိ အသီးသီး တိုးတက် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်တွေကတော့ ပဲတီစိမ်း၊ ရော်ဘာ၊ ကျွန်းသစ်လုံး၊သစ်မာလုံး၊ ရေထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး၊ သွင်းကုန်တွေကတော့ သံနဲ့ သံမဏိပစ္စည်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း၊ တာယာကျွတ်နဲ့ ဆေးဝါးများဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလည်း ရင်းနှီးမြူပ်နံှဖို့စိတ်ဝင်စား တရုတ်နိုင်ငံက ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေ၊ ကုန်သည်စက်မှု အသင်းတွေက ဦးဆောင်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များဟာဒီကာလအတွင်းမှာ (၃) ကြိမ် လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ် နိုင်ငံ Yunnan Provincial Chamber of Commerce ၊ Foreign Trade& Economic Cooperation of Guandong Province ၊ The All China Federation of Industry and Commerce(ACFIC) တို့မှ ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၁၃ဝ ကျော်လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့ဟာလယ်ယာစိုက်ပိုျးရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံ စားသောက်ကုန်များထုတ်လုပ်ရေး၊အဆင့်မြင့်သစ်အချောထည်နဲ့ ပရိဘောဂထုတ်လုပ်ရေး၊ ှ့ Shopping Center များထူထောင်ရေး၊ ဟိုတယ် နဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ သတ္တုကဏ္ဍများကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ မေးမြန်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်ရှိ သစ်အချောထည်စက်ရုံနဲ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့လာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ မြန်မာ-တရုတ်(ဟောင်ကောင်) အပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံ ပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏ တွေကတော့၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့ရာမှ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကန်ဒေါ်လာသန်း ၂ ဒသမ၈ ဘီလီယံကျော်ထိ တိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့တဲ့ ပို့ကုန်တွေကတော့ ပဲတီစိမ်း၊ နှမ်း၊ ရော်ဘာ၊ ကျွန်းသစ်လုံးနဲ့ ရေထွက် ကုန်များဖြစ်ပြီးသွင်းကုန် အနေနဲ့မော်တော်ယာဉ်၊ မီးရထား၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း၊ လေအေးပေးစက်၊ အင်ဂျင်စက်အမျိုးမျိုး၊ စက်နဲ့ စက်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ၊ ရေနံထွက် ဓာတုပစ္စည်း၊ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်း၊ သံနဲ့သံမဏိပစ္စည်း၊ ကော်ဖီနဲ့ လက်ဖက်ခြောက် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ကုန်သွယ်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ပို့ကုန်များမှာ ရော်ဘာ၊ ပြောင်းဖူး စေ့၊ ပဲတီစိမ်း၊ ငါးရှဉ့်၊ကဏန်း၊ ရေငန်ငါး၊ အေးခဲအမဲသားနဲ့ ရာသီအလိုက်သီးနံှများဖြစ်တဲ့သရက်သီး၊ ဖရဲသီး၊ သခွာမွှေးတို့ဖြစ်ပြီး၊ နှမ်းမျိုးစုံ၊ ပရဆေးကုန်ကြမ်း၊ဝဥခြောက်နဲ့ ကြိမ်များ တင်ပို့ပါတယ်။ သွင်းကုန်အနေနဲ့ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ဖိနပ်မျိုးစုံ၊ နို့မှုန့်၊ ဖယောင်း၊ ဘိလပ်မြေနဲ့ ချည်ခင်များအဓိက တင်သွင်းပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်လည်းစိတ်ဝင်စား ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတော့ ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ လာရောက်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၈ ခုမှ အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦး လိုက်ပါလာ ခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းဌာနမှ ဦးဆောင်ပြီး လာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လူသုံးကုန်၊ အလှကုန်လုပ်ငန်း၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေမှာ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ရောင်းချ ဖြန့်ဖြူးဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏများမှာ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ တွင် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂ဝ နီးပါးရှိခဲ့ရာမှ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၄၁ သန်းကျော် ထိ တိုးတက်လျက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အဓိကတင်ပို့တဲ့ ပို့ကုန်အမယ်များကတော့ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲလွန်းဖြူ၊ ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ မတ်ပဲ၊မန်ကျည်းသီး၊ မြေထောက်ပဲ၊ နနွင်းနဲ့ သစ်အချောထည်များဖြစ်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကနေ ဆေးနဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်း၊ သံနှင့် သံမဏိ၊ စက္ကူအမျိုးမျိုး၊ ဖန်နှင့် ဖန်ထည်ပစ္စည်း၊ ပလတ်စတစ် ပစ္စည်းများ၊ နို့ဆီ၊အလှကုန်၊ ဆေးဝါးကြီးနဲ့ ဓာတုဗေဒကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို တင်သွင်းလျက် ရှိပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံကကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့စိတ်ဝင်စား ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့က မလေးရှားနိုင်ငံ ပြည်ပကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိူးတိုးတက်ရေး ကော်ပို ရေးရှင်း (Malaysia External Trade Development Corporation -MATRADE) မလေးရှားကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေးအသင်း (Federation of Malaysian Freight Forwarders - FMFF) တို့မှ ဦးဆောင်ပြီး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမှလုပ်ငန်းရှင် ၄ဝ ဦးပါအဖွဲ့ လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ 'စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်ရာမှာLogistic ကမပါမဖြစ်အထူးအရေးပါတယ်။ အာရှတိုက်အပါအဝင် နိုင်ငံအားလုံးနဲ့ ကုန်သွယ်မှုကွန်ရက်ကြီးအဖြစ် အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ကာ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကို အချိန်မီစရိတ် သက်သာတဲ့ ခေတ်မီနည်းပညာ သွင်းအားစုတွေကို သုံးပြီး ကျွန်တော်တို့မလေးရှား ပြည်ပကုန်သွယ်မှု ဖွံ့ဖြိူးတိုးတက်ရေး ကော်ပိုးရေးရှင်းကလုပ်ဆောင်နေပါတယ်''။' " မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီး ပိုမို တိုးမြင့်ကုန်သွယ်ကြဖို့ စီးပွားရေးကဏ္ဍအသီးသီး ဖွံ့ဖြိူးရေး အတွက်နဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကြီးအတွင်း ရောင်းဝယ်ဖလှယ်မှု အရှိန်အဟုန်ပိုမိုရရှိစေဖို့ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများရဲ့ ပေါင်းစပ် အကောင်အထည်ဖော်မှုများနဲ့ ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။'' ''မလေးရှားရဲ့ Logistic ကဏ္ဍက အာဆီယံ ကလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ စံနှုန်းစနစ်များအတိုင်း အဆင့်မြင့် ဆိပ်ကမ်းများ၊ စီးပွားရေးဇုန်များ စတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကောင်းများ၊ ပံ့ပိုးပေးမှုများနဲ့ ဖွံ့ဖြိူးတိုးတက်လျက်ရှိရာ နှစ်နိုင်ငံယခုလိုပေါင်းစပ်ပြီး ကုန်သွယ်မှု ပိုမိုဖွံ့ဖြိူးူရန် ဆောင်ရွက်သွားကြရန် လိုပါတယ်'' လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားသံအမတ်ကြီး HE. Mazal Muhammad က မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ-မလေးရှား ကုန်သွယ်မှုကိုကြည့်လျှင် ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကန်ဒေါ်လာ ၂၃၁ သန်းကျော်ကနေ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကန်ဒေါ်လာ ၃၁၂သန်းကျော်ထိတိုးမြင့် ကုန်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ အများဆုံးကုန်သွယ်တဲ့ ပို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ ဆန်၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ မန်ကျည်းသီး၊ ရော်ဘာ၊ ထန်းလျက်၊ကျောက်စိမ်း၊ ငါး၊ ပုစွန်တို့ဖြစ်ပြီး အများဆုံးကုန်သွယ်တဲ့ သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ သံနှင့် သံမဏိ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်း၊ စားအုန်းဆီ၊ ငါးဖမ်းပိုက်၊ ဘိလပ်မြေ၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ မော်တော်ယာဉ်၊ စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း နဲ့ ဆေးဝါး တို့ဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့ Look East ပေါ်လစီနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသ ဖွံ့ ဖြိုးရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အရေးပါ အိန္ဒိယနိုင်ငံပါလီမန်အမတ် Mr. Mani Shankar Aiyar နဲ့မီဇိုရမ်ပြည်နယ် ဂုဏ်ထူးဆောင် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Mr.Lairinllana Sailo ဦးဆောင်ပြီး၊ ကော်လ်ကတ္တားကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ်က တာဝန်ရှိသူများပါဝင်တဲ့ အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ဒေသများဖြစ်တဲ့ မီဇိုရမ်၊ မဏိပူရ၊ အာသံနဲ့ အရူနာချာပရာဒက်ချ်ဒေသများကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၅၅ ဦးဟာ စက်တင်ဘာလ ဒုတိယပတ်အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နံှမှုများ တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန် ရည်မှန်းချက်ထား ရှိတဲ့အတွက် အာဆီယံနိုင်ငံများရဲ့ တံခါးပေါက်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ အရှေ့မြောက်ဒေသကို အိန္ဒိယ နိုင်ငံအနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်လိုကြောင်းနဲ့ မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်း အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက် ဒေသမှာ လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နံှကြရန် ဖိတ်ခေါ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုများကို ကြည့်တဲ့အခါ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှာ ကန်ဒေါ်လာသန်း ၅၇ဝနီးပါး ရှိခဲ့ရာကနေ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝမှာ ကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၂ဝဝ ကျော် အသီးသီး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်လျက်ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာ- အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာ အများဆုံးကုန်သွယ်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ကွမ်းသီး၊ ချင်းပဲ (ပဲယင်း)၊ နံနံစေ့၊ ငါးလေး ခြောက်၊ဆေးရိုး၊ ဆေးကြေမှုန့်၊ ပန်းသီး၊ ဝက်အရှင်၊ စားသောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့နေကြပြီး အများဆုံးသွင်း ကုန်တွေကတော့ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ၁/၄ဝ ချည်၊ ပလတ်စတစ် အကြည်ပြား၊ ဇီယာ၊ ဆောင်မေခါးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ကုန်သွယ်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ကျွန်းသစ်လုံး၊ သစ်မာလုံး၊ သစ်ပါးလွှာနဲ့ သကြားတို့ဖြစ်ပြီး အများဆုံးတင်သွင်းတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ မီးရထားနဲ့ မီးရထားပစ္စည်း၊ စက်နဲ့စက်ပစ္စည်း၊ သံနဲ့ သံမဏိပစ္စည်း၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ၊ ချည်ခင်၊ တာယာနဲ့ ဆေးဝါးများ ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားကလည်း ကုန်သွယ်မှုတိုးမြင့်ဖို့ စိတ်ဝင်စား Korea Importers Association မှ ဥက္ကဋ္ဌ Dr.Je Tae Lee ဦးဆောင်တဲ့ ၁၉ ဦးပါအဖွဲ့ဟာ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် မေလ ၂ဝရက်နေ့က လာရောက်ခဲ့ကြပြီး သဘာဝအရင်းအမြစ်၊ မီးသွေး၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ဇင့်၊ နီကယ်၊ သံ အစရှိတဲ့ သတ္တုလုပ်ငန်းများ၊ ဒီဇယ်စွမ်းအင် စက်ရုံနဲ့ စက်မှုဆိုင်ရာကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်စွမ်းအားလုပ်ငန်းများ၊ မီးစက်များ၊ ဆေးနဲ့ ဆေးပစ္စည်းများ၊ အလှကုန်ပစ္စည်း၊ ထုတ်ပိုး ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊လုံခြုံရေးသုံးအာရုံခံကိရိယာ၊ အဏုကြည့် မှန်ပြောင်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဖန်ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ၊ ဓာတုဗေဒသုံး ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ ဟိုတယ် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လယ်ယာထွက်ကုန်တန်ဖိုးမြင့်ကုန်ထုတ် လုပ်ရန် Color Sorter စက်၊ ရေသန့်စက်၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်နဲ့အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာ-ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှု အခြေအနေများကတော့ ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကန် ဒေါ်လာ ၁၂၄ သန်းခန့်ရှိခဲ့ရာ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကန်ဒေါ်လာသန်း ၃ဝဝ နီးပါးထိပိုမိုတိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာ-ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ပို့ကုန်အနေနဲ့ နှမ်း၊ ရော်ဘာ၊ သစ်ပါး လွှာ၊ အထပ်သား၊ချုပ်ပြီးအထည်များဖြစ်ပြီး၊ သွင်းကုန်အနေနဲ့ မော်တော်ယာဉ်နဲ့ မော်တော်ယာဉ် အပိုပစ္စည်းများ၊ သံနဲ့ သံမဏိပစ္စည်းများ၊ စက်နဲ့စက်ပစ္စည်းများ၊ ပလတ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ သားရေတု ပစ္စည်းများ၊ စက္ကူ၊ ချည်ခင်များ၊ ဆေးဝါး၊ ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ခြောက်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စပါးသီးနှံမှာကျရောက်တက်တဲ့ ဖြုတ်ကောင်(Hopper) ကိုကာကွယ်ဖို့ (IPM) နည်းနဲ့ ဘက်စုံပိုးမွှားကာကွယ်ရေးစီမံချက် အလုပ်ရုံဆေးနွေးပွဲကျင်းပ စပါးသီးနံှမှာကျရောက်ပြီး အများဆုံးဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ ဖြုတ်ကောင် (Hopper) ကို Integrated Pest Management (IPM) နည်းနဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းများ အတိုင်း ဘက်စုံပိုးမွှားကာကွယ်နိုင်မယ့် အခြေအနေ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မိုျးစေ့ဌာန၊ FAO Auditorium မှာ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာ့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးလုပ်ငန်းအသင်းနဲ့ အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါး သုတေသနဌာန(IRRI) တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ ပညာရှင်များ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်နဲ့ ပါမောက္ခများ၊ မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးမှ အရာထမ်းများ IRRIမှ ဂေဟဗေဒ သိပ္ပံ ပညာရှင်များဖြစ်တဲ့ Dr K.L.Heong ၊ Dr Lorry Wing မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးလုပ်ငန်းအသင်းမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ၊ ဆန်စပါး အထူးပြုကုမ္ပဏီမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စုစုပေါင်း ၈ဝ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာ့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးကျော်ဝင်းက ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး လုပ်ငန်းအသင်း အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးရဲမင်းအောင်နဲ့ IRRIမှ ပညာရှငDr K.L Heong တို့မှ အမှာစကားအသီး သီး ပြောကြားကြပြီး၊ စပါးဖျက်ပိုးဖြုတ်ကောင်ကို ဂေဟ နည်းစနစ်နဲ့ သဘာဝနည်းများအတိုင်း ကာကွယ်နိုင်မယ့်အခြေအနေကို စုပေါင်းဆွေးနွေး အမြင်ခြင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖြုတ်ကောင်ကျရောက်တတ်တဲ့ အကြောင်းရင်းများ စပါးပင်တွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ ဖြုတ်ကောင်ကျရောက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ရေကြီးရေလံျှမှု၊ မိုးခေါင်ခြောက်သွေ့မှုနဲ့ နာဂစ်လို လေမုန်တိုင်း အကြီးအကျယ် ကျရောက်မှုတွေဆိုတဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်အပြင် ပိုးသတ်ဆေး အလွယ်တကူနဲ့ အလွန်အကံျွသုံးစွဲမှုတွေကြောင့်လို့ Dr. K.L.Heong က ပြောကြားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးရှား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေမှာ ဖြုတ်ကောင် ကျရောက်ခဲ့ပါ တယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လယ်မြေဟက်တာ ၁ သန်းမှ စပါးတန်ချိန် ၁ ဒသမ ၁ သန်း၊ စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရသလို ဗီယက်နမ်မှာဟက်တာ ၃ သိန်းခန့် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်ခဲ့ပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဟက်တာ ၄ သိန်းနီးပါး ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ယခု နှစ် ၂ဝ၁ဝ မှာလည်းထိုင်းမှာဟက်တာ ၅သောင်း၊ ဗီယက်နမ်မှာ ဟက်တာ ၁၄ဝဝဝဝခန့်နဲ့ မလေးရှားမှာ ဟက်တာ ၂ဝဝဝ ခန့် ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ ထပ်လောင်း ပြောကြား ပါတယ်။ဖြုတ်ကောင် များကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်များဟာ လေတိုက်ခတ်ရာ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ပြန့်ပွားတတ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း နာဂစ်မုန်တိုင်း ဖြစ်ပြီးနောက် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ဘိုကလေးမြို့နယ်မှာ ဖြုတ်ကောင်ကျရောက်မှုကြောင့် စပါးများပျက်စီး ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။စပါးဖျက်ဆီးမှုအများဆုံး ဖြုတ်ကောင် မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိရတဲ့ ဆန်၊ စပါးဖျက်တဲ့ ပိုးမွှား ၁၄ မိုျးရှိတဲ့အနက် ကျရောက်မှုအများဆုံး ဖြုတ် အမိုျးအစား ၄ မိုျးရှိတယ်လို့ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ အပင်ကာကွယ်ရေးဌာနမှ မန်နေဂျာဒေါ်ဖြူဖြူလွင် က ပြောကြားပါတယ်။ အဲဒီဖြုတ်တွေကတော့ brown plant hopper လို့ခေါ်တဲ့ ဖြုတ်ညို၊Green Leafhopper ဖြစ်တဲ့ ရွက်လိပ်ပိုး၊ white backed plant hopper လို့ခေါ်တဲ့ ကျောဖြူ ဖြုတ်ပိုးနဲ့ Zigzag leaf hopper တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုးတွေထဲမှာ စပါးထွက်ရှိမှုကို အဆိုးဝါးဆုံး ထိခိုက်တာကတော့ ဖြုတ်ညိုနဲ့ ကျောဖြူ ဖြုတ်ကောင်ပဲ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဒေါ်ဖြူဖြူလွင်က ပြောကြားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဖြုတ်ကျရောက်မှုကြောင့် စပါးအထွက်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ စပါးအထွက် ထိခိုက်အောင် ကျရောက်တဲ့ ပိုးဟာ ဖြုတ်ညိုနဲ့ ကျောဖြူဖြုတ်များ ဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လည်း ဖြုတ်ညို ကျရောက်မှုကြောင့် စပါးခင်းများ ပျက်စီးပြီး အထွက်ဆုတ်ယုတ်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံ နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၁၉၉၈-၉၉ ခုနှစ် မိုးရာသီမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ ပဲခူး၊ ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီ၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေးနဲ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၆ ခု၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ကယားနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်လေးခုမှာရှိတဲ့ မြို့နယ် ၄၈ မြို့နယ်၊ လယ်မြေ ဧရိယာ ၈၈ဝ၂၉ ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အများဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ မိုးစပါးစိုက်ဧက ၅၂ဝဝဝ ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခါကတော့ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် ဧရာဝတီတိုင်း ဖျာပုံခရိုင် ဘိုကလေးမြို့နယ်မှာ နွေစပါး ရာသီအတွင်း လယ်မြေ ၇၁ဝ ဧက ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီး ဒီနှစ် ၂ဝ၁ဝ မိုးစပါး ရာသီမှာလည်း ဒေဒရဲမြို့နယ်မှာ ဖြုတ်ညို ကျရောက်မှု ပြန်ဖြစ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ မနောသုခနဲ့ သီးထပ်ရင် စပါးအမျိုးအစားများမှာ ထိခိုက်မှု ခံရတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ဖြုတ်ပိုးပြန့်ပွားနိုင်မှု ဖြုတ်ညိုဟာ အရွယ်အစားသေးပြီး ဘဝစက်ဝန်း (Life Cycle) တိုပါတယ်။ ဥအမြောက်အမြားဥနိုင်ပြီး လျင်မြန်စွာ ပံျသန်းသွားလာနိုင်တာကြောင့် ပြန့်ပွားနှုန်းမြန်တယ်လို့ အပင်ကာကွယ်ရေးဌာန ဒုတိယ ကြီးကြပ် ရေးမှူး ဒေါက်တာ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်းက ရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေတိုတ်ခတ်ရာ လမ်းကြောင်း အတိုင်း ပြန့်ပွားနိုင်သလို ရေကြီးမှု ကြောင့်လည်း ပံျ့နံှ့နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လယ်သမားများဟာ စပါးပင်မှာ ပိုးမွှား ကျရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ပိုးသတ် ဆေးဖြန်းရမယ်ဆိုတဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အသိရှိခြင်းကြောင့်လို့ Dr K.L Heong ကလည်း ထပ်လောင်းရှင်းလင်းပါတယ်။ စပါးမှာ ကျရောက်တတ်တဲ့ ရွက်လိပ်ပိုးကြောင့် စပါးရွက် ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပျက်စီးမှုရှိတဲ့တိုင် စပါးအထွက်နှုန်းကို ထိခိုက်နိုင်မှု မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တောင်သူ အများစုဟာ ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲမှုကြောင့် ရွက်လိပ်ပိုးသာမက လယ်သမားများရဲ့ အခြားမိတ်ဆွေ ပိုးမွှားများပါ သေကျေပျက်စီးရတဲ့အတွက် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းပြီး နှစ်ပတ်အတွင်း ဖြုတ်ညိုများဟာ ဥဥပြီး ၃-၄ ရက်ခန့်ကြာရင် တားမနိုင်ဆီးမရ ပြန့်ပွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ပိုးသတ်ဆေးများ အလွယ်တကူမသုံးစွဲသင့့််် စပါးမှာကျရောက်တတ်တဲ့ ပိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ ရွက်လိပ်ပိုးလို အထွက်နှုန်းကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်မှု မရှိတဲ့ပိုးဆိုရင် ဒီအတိုင်းပဲ ပိုးရဲ့ အရိပ်အခြေကိုကြည့်ပြီး နေသင့်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ဒီပိုးတွေရဲ့ ရန်သူပိုး (တောင်သူများရဲ့ မိတ်ဆွေပိုး)တွေက အလိုအလျောက် ထိန်းခုျပ်နိုင်တာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေ ပိုးတွေကို သေစေနိုင်ပြီး ဖြုတ်ညိုတွေ တိုးပွားဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖြစ်စေတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးတွေ အလွယ်တကူ မသုံးစွဲသင့်ဘူးလိုံ့ီ Dr K.L Heong က ဆိုပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နဲ့ထိုင်းတို့မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကို (IRRI) က သုတေသနလုပ်ခဲ့ရာမှာ ရွက်လိပ် ပိုးကျတဲ့ စပါးခင်း များကို ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခဲ့တာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ဖြုတ်ညိုများကျရောက် ကာ စပါးစိုက်ဟက်တာ ၅ဝဝဝဝ ခန့် ပျက်စီးခဲ့တာ တွေ့ရှိရတယ်လို့လည်း ထပ်လောင်းပြောကြားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုးသတ်ဆေးလုပ်ငန်းများက ပိုးသတ်ဆေးမျိုးစုံ ရောနှောပြီး (cocktail) ပုံစံဆေးဘူးများ သုံးစွဲခြင်းကို စနစ်တကျ ထိန်းခုျပ်တားဆီးသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အပင်ပိုးမွှားထိန်းသိမ်းရေး(IPM) စနစ်ကျင့်သုံးဖို့လိုစပါးများကို ဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ ဖြုတ်ကောင်ကျရောက်မှုကို အပင် ပိုးမွှားထိန်းသိမ်းရေး (Integreded Pet Management) စနစ်နဲ့ ကာကွယ်တာ အကောင်းဆုံးပါလို့ ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာသုတေသနပြု ချက်အရ Dr. K L Heong က ပြောကြား ပါတယ်။ ဒီလို အပင်ပိုးမွှား ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာမှ ဇီဝမျိုးစုံပြည့်စုံမှု (Bio- diversity)၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဂေဟစနစ် (Environment & Ecosystem) နည်းလမ်းများနဲ့သာ ဖြေရှင်းနှိမ်နင်းခြင်းဟာ အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် စိုက်ပိုျး ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး (Sustainable Agriculture) ကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှာပါလို့ အကြံပြု ပြောကြားပါတယ်။ ကုသခြင်းထက် ကာကွယ်ခြင်းပိုအောင်မြင် ဖြုတ်ပိုးကျရောက်ပြီဆိုရင် အဲဒီစပါးခင်းကို မီးရှို့ပြီး တခြားလယ်ကွင်းတွေကို စီးဆင်းနိုင်တဲ့ ရေစီးရေလာ ကို ဖြတ်တောက်ရပါမယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ ဖြုတ်ကောင်ကျရောက်မှုကို အလင်းထောင်ချောက်(Light trip) အသုံးပြု ဖမ်းဆီးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ပြန့်ပွားနှုန်းမြန်တဲ့ ဖြုတ်ကောင်ကို မနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အမှန်တကယ်တော့ ကုသခြင်းထက် မကျရောက်အောင် ကာကွယ်ခြင်း ပိုမိုအောင်မြင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြုတ်ကောင်များကို နှိမ်နင်းရာမှာ ဖြုတ်ကောင်ရဲ့ သဘာဝရန်သူများဖြစ်တဲ့ ဝတ်မှုံကူးတဲ့ အကောင်များ (Pollinators) များနဲ့ နှိမ်နင်းခြင်းဟာ အထိရောက်ဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုးမကျအောင် ကာကွယ် တဲ့ အနေနဲ့ ဝတ်မှုံကူးတဲ့အကောင်များ နေထိုင်နိုင်တဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးသင့်ပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်းဟာ မလိုလားတဲ့ ဓာတ်ြွကင်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖျက်ဆီးမှုများဖြစ်ကာ ဝတ်မှုံ ကူး တိရစ္ဆာန်ငယ်များသေဆုံးပြီး၊ ဖြုတ်ကောင်များ အလွယ်တကူ ပေါက်ပွား ဖျက်ဆီးခံရနိုင်ပါတယ်။ ဂေဟစနစ်နဲ့ ကာကွယ် Dr K L Heong ဆက်လက်ပြောကြားရာမှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စိုက်ပိုျးရေးနိုင်ငံများနဲ့ သုတေသနများမှ IPM ကို ဖော်ဆောင်ရာမှာ သဘာဝ နည်းစနစ်များကိုသာ ဂေဟနည်းလမ်းများနဲ့ ဆောင်ရွက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါ တယ်လိုဆိုပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူတို့ရဲ့ သဘာဝမိတ်ဆွေပိုးတွေ အများကြီးရှိပေမဲ့ လူတွေက သတိ မထားမိကြပါဘူး။ အလွယ်တကူ သတိထားမိတာကပျား တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပျားတွေဟာ ကိုယ်တိုင်လည်း ဝတ်မှုံကူးသလို ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ မိတ်တွေပိုးတွေကိုလည်း ခေါ်ယူလာ တတ်ကြတာကြောင့် ပျားတွေ လာရောက်နိုင်ဖို့ စပါးပင်တွေရဲ့ကြားမှာ အဝါရောင်၊ အဖြူရောင်ပန်းတွေ ပွင့်တဲ့အပင်တွေ စိုက်ပျိုးခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးသော ဂေဟစနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ထောက်ပြပါတယ်။ စပါးစိုက်ခင်းတွေမှာ ရေနေသတ္တဝါများထည့်သွင်းခြင်း၊စိုက်ခင်းများအနီးအဝါရောင်၊ အဖြူရောင် ပန်းပွင့်အပင်များဖြစ်တဲ့ ပဲတီစိမ်း၊ ရုံးပတီသီးတို့လို သီးပင်စားပင်၊ ပန်းပင်တွေကိုကန်သင်းဘောင် မှာ စိုက်ပိုျးမယ်ဆိုရင် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းဖို့ လိုအပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင် စပါးကွင်းတွေကြားထဲမှာ ပဲတီစိမ်း၊ နှမ်းစိုက်ပိုျးသလို ဗီယက်နမ်မှာလည်း ဂေါ်ဖီထုပ်ပင်နဲ့ အခြား ပင်များ၊ နယူးဇီလန်မှာလည်း ခရမ်းရောင်ပန်းပွင့်များ ကြားညှပ် စိုက်ပိုျးခြင်းဖြင့် ဖြုတ်ကောင် ကျရောက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဂေဟစနစ်အားသာချက်ရှိ Dr. K.L Heong က ဆက်လက်ဆွေးနွေးရာမှာ ဇီဝမျိုးစုံ၊ သီးနံှ အပင်မိုျးစုံစိုက်ပျိုးခြင်းဟာ ပိုးမွှား အန္တရာယ်ကို သိသိသာသာတားဆီးမှု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဆန်စပါး၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ သစ်သီးဝလံစတာတွေကို စုံစုံလင်လင် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိတာကြောင့် ဒီလိုရှိနေပြီးသား အခြေအနေကောင်းများကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အားသာချက်က ဒေသအသီးသီးမှာ စပါးမျိုးခွဲများစွာကို စိုက်ပိုျးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးမွှား ကျရောက်မှု ဒဏ်ခံရတဲ့ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတို့မှာ စပါး ၂မိုျး ၃ မိုျးခန့်ကိုသာ တစ်နိုင်ငံလုံး စိုက်ဧရိယာရဲ့ ၇ဝ-၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှာ စိုက်ပျိုးတာကြောင့်အပင်မိုျး စုံလင်မှုနည်းပါးပြီး ပိုးမွှား ပြန့်ပွားလွယ်ကာ ဆုံးရှုံးမှုများရခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။IPM နည်းနဲ့ နှိမ်နင်းဖို့ လယ်သမားတွေ နိုးထသင့်ပါပြီ ''ထိုင်းနိုင်ငံကတော IPM နည်းစနစ်ရဲ့ အကိုျးရလဒ်ကို နားလည်လာပြီဖြစ်လို့ ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲမှု ထိန်းခုျပ်လာကြပြီး ဘက်စုံပိုးမွှားကာကွယ်ရေး စီမံချက်များ ချမှတ်ကာ ဖြုတ်ကျရောက်မှုကို ကာကွယ်နေပြီဖြစ် ပါတယ်။h IPM ရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ သရုပ်မှန်ကို ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်းနဲ့ ခွဲခြားနိုင်ရေး၊h IPM နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပညာပေး လုပ်ငန်းများ (Capacity Building)ကို IRRI မှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သင်ကြားပို့ချပေးဖို့ ကျွန် တော်တို့ IRRIကလည်း မြန်မာ့စိုက်ပိုျးရေးလုပ်ငန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးလုပ်ငန်း အသင်းတို့နဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် စပါးပင်တွေ ပိုးကျရောက်နေရင် စိတ်ဓာတ် မကျဘဲ အကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို သေချာစိစစ်ပြီးIPM နည်းနဲ့ နှိမ်နင်းဖို့ လယ်သမားတွေ နိုးထသင့်ပါပြီ''လို့ Dr. K.L Heong က တိုက်တွန်း ပြောကြား ပါတယ်။ ဆန်စပါးအထူးပြုကုမ္ပဏီများမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးလုပ်ငန်းအသင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးရဲမင်းအောင်က ဆွေးနွေးရာမှာ အသင်းဝင် ဆန်စပါး အထူးပြုကုမ္ပဏီ ၃၃ ခုရှိပြီး တောင်သူလယ်သမားများနဲ့ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ကစပြီး ထိတွေ့ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ''နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ဆန်စပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံဖို့ (Food Security)၊ ဘေးကင်းစိတ်ချရဖို့(Food Safety) ကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်ဖို့ ညွှန်ကြား ထားပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အထူးပြုကုမ္ပဏီများအနေနဲ့ စိုက်ပိုျးထုတ်လုပ်ကြိတ်ခွဲရောင်းချတဲ့ ကွင်းဆက် တစ်လျှောက်မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နံှဆောင် ရွက်နေတာဖြစ်လို့ အသင်းတိုင်းမှာ Food Safety အသိနဲ့သတိ အမြဲ ယှဉ်တွဲထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ ဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ပိုးမွှားများကို ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်းနဲ့ ဖြေရှင်းခြင်းဟာ မလိုလားအပ်တဲ့ ဇီဝမိုျးကွဲ (Biodiversity) ကို ထိခိုက်စေတဲ့ အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်တတ်လို့ ရှောင်ရှားနိုင်ရေး ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်သိသလို လယ်သမားတွေအသိရှိဖို့ ချပြဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်''ဟု ပြောကြားသွားပါတယ်။IPM စနစ်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိနိုင် သဘာဝနည်းလမ်းများဖြစ်တဲ့ စိုက်ခင်းအနီး ပန်းပင်များ စိုက် ပျိုးခြင်း၊ ကန်သင်းပေါင်မှာ စားပင်သီးနံှ များ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ပိုးမွှားအန္တရာယ် ကာကွယ်ရာရောက်တဲ့အပြင် တောင်သူတွေ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဝင်ငွေ တိုးတက်စေတာကြောင့် ဒီစနစ်ကို ဖော်ဆောင်သင့်ပါတယ်လို့ ဦးရဲမင်းအောင်က ဆက်လက် ပြောကြားပါတယ်။ လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲမှုဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် နည်းပါးနေသေးတာဖြစ်လို့ ဒီလို အချိန်အခါကောင်းမှာ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ပိုမိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ IPMကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းမှုအတွက် နိုင်ငံခြားငွေ သုံးစွဲမှု လျော့ နည်းသွားမှာဖြစ်သလို၊ ဇီဝမိုျးစုံထိန်းသိမ်းမှုကြောင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရာ ရောက်တဲ့အပြင် စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန်များလည်း ပိုးသတ်ဆေးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ဓာတ်ြွကင်းအန္တရာယ်မှ ကာကွယ် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ မြန်မာ့ဆန်ဈေးကွက် ဖော်ဆောင်လာနိုင် ''ဒီလိုကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဓာတုဆေးဝါးကင်းစင်တဲ့ ဆန်၊စပါးများထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်း ဈေးကွက် သာမက ပြည်ပဈေးကွက်မှာပါ ဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့(Food Safty) မြန်မာ့ဆန်ဈေးကွက် ဖော်ဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာ့စိုက်ပိုျး ရေးရဲ့ တောင်သူတွေကို တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ ''ဘာပဲစိုက်စိုက် နေကြာညှပ်စိုက်'' ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ဟာလည်း နိုင်ငံတကာမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပိုးမွှား ကာကွယ်ရေးစနစ်(IPM) ကို အထောက်အကူပြုနေပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်တွေမှာ အထူးပြု ကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့ စပါးမိုျးစေ့များနဲ့အတူ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်မိုျးစေ့များကိုပါ ပူးတွဲထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့် အသင်း အနေနဲ့ရော အထူးပြုကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပါ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ IPM လုပ်ငန်းများ ပိုမိုကျယ်ပြန့် အောင်မြင်လာစေဖို့ လက်ရှိအထူးပြုကုမ္ပဏီများမှ ဆန်စပါးထွက်ရှိရာဒေသများမှာ ရေတို၊ ရေရှည်စီမံကိန်းများချမှတ်ပြီး မြန်မာ့စိုက်ပိုျးရေးလုပ်ငန်းနဲ့ IRRI တို့ရဲ့ အကူအညီရယူ ပူးပေါင်းကာ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ ကျေးရွာများမှာ တောင်သူများကို အနီးကပ်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ'' လို့ ဦးရဲမင်းအောင်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာ။MIRT
အများအားဖြင့် ကုမ္ပဏီကြီးတွေ က နည်းပညာသစ်တွေကို ဖြန့်ဝေ သုံးစွဲခွင့်ပြုဖို့ တုံ့ဆိုင်းလေ့ရှိကြ တယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းတွေမှာ နည်းပညာ သစ်တွေ ထည့်သွင်းရေးဆွဲထား လို့ အဲဒီနည်းပညာတွေကို လွယ် လင့်တကူ ရယူဖြန့်ဝေသုံးစွဲနိုင် တယ်။ ဒါကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် လျော့ကျလာနိုင်ပါတယ်။- နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ အညီ ထုတ်လုပ်လို့ ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းလက် ခံနိုင်တဲ့ ကုန်စည်ဖြစ်တာကြောင့် ဈေးကွက်ပွင့်ပြီး ဈေးကွက်သစ် ဖန်တီးနိုင်တယ်။ အကိုျးအမြတ် တိုးလာပါတယ်။- အောင်မြင်ပြီးသား အချက်တွေ အပေါ် အခြေခံပြီး စံချိန်စံညွှန်း တွေသတ်မှတ်ထားလို့ သုတေသနပြု စွန့်စားရမှုတွေအနည်းဆုံး ဖြစ်သလို ဆန်းသစ်တီထွင်ပြီး သားဖြစ်လို့ တီထွင်ဆန်းသစ်ရတဲ့ စရိတ်လျော့ကျလာပါတယ်။- အရည်အသွေးကိုက်ညီမှု ထောက် ခံချက်လက်မှတ်တွေကို လက်ခံနိုင် ပြီး (၂)ခါပြန် စစ်ဆေးရမှုတွေ လျှော့ချနိုင်လို့ စရိတ်လျော့ကျ လာပါတယ်။ အဲဒီလိုစရိတ်လျော့တာ၊ ဈေး ကွက်ပွင့်တာ၊ ဈေးကွက်သစ်ထွင်နိုင် တာ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု မြင့်မားတာ၊ နှစ်ခါပြန်စစ်ဆေး ရမှု လျော့ကျတာ တွေကြောင့် ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှု၊ ပြိုင်ဆိုင်နိုင်မှုတွေ မြင့်တက်လာလို့ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးကို အထောက်အကူပြု ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေအပေါ် FTA ၏ အကိုျးကျေး ဇူးတွေကို တင်ပြလိုပါတယ်။ ဒီနေ့ ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေးရဲ့ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက် က NAFTA-North America FTA? APEC-Asia Pacific Economic Cooperation? EU-European Union? CAFTA- Central America FTA စတဲ့ အမိုျးမိုျးသော ဒေသဆိုင်ရာ FTA တွေမှာ လုပ်ဆောင် နေတာဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုနဲ့ FTA ရဲ့ သက်ရောက်မှုကို တင်ပို့ကုန်မူဝါဒတစ်ခုတည်းပေါ် စူးစိုက် လေ့လာတာ မလုံလောက်တော့ဘဲ ပို့ကုန်ကဏ္ဍနဲ့အတူ နိုင်ငံရဲ့ ကဏ္ဍ အားလုံး ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပါ လေ့လာရပါမယ်။ FTA ထူထောင်လို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်တွေ အတွက် လုပ်သားအခွင့်အလမ်းတွေ တိုးပွားနိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရတာ ထင်သာ မြင်သာ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ အရင်က တားမြစ် ထားတဲ့ ကုန်သွယ်ရေး အတားအဆီး တွေကို ထိထိရောက်ရောက် ကျော် လွှားနိုင်လာလို့ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှု (FDI-Foreign Direct Investment) အခွင့်အလမ်းတွေ တိုးပွားလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် FTA ကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက် အခက် အခဲတွေလဲ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အဓိကအခက်အခဲကတော့ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေက ထုတ် ကုန်တွေနဲ့ ဈေးကွက် မှာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင် မှုကို ထိခိုက်နိုင် တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လုပ်ငန်းမှာမဆို အဆိုး၊ အကောင်း ဒွန်တွဲနေတာကြောင့် အကိုျးကျေးဇူးနှင့် ထိခိုက်နိုင်မှုကို ညှိနှိုင်းချိန်ဆ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါ တယ်။ FTA ရဲ့ အကိုျး၊ အပြစ်တွေကို ညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့ စံချိန်စံညွှန်းတွေကို လက်နက် ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် အသုံးချ နိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အတိတ်ကာလ ကတော့ စံချိန်စံညွှန်းတွေကို ကိုယ်ကိုျးစီးပွား ကာကွယ်ရေးအတွက် အခိုျ့ နိုင်ငံတွေက အသုံးချခဲ့ကြပါတယ်။ အခု လို Globalization ကာလမှာတော့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းတွေကို အသုံးချပြီး ကုန်သွယ်ရေးညီမျှမှုတွေကို ဖန်တီးနိုင်လာလို့ ကုန်သွယ်ရေးအတား အဆီးတွေကို ကျော်လွှားနိုင်လာပြီ ဖြစ်လို့ စံချိန်စံညွှန်းရဲ့ အရေးပါမှုကို ပိုမိုသတိပြုလာကြပြီး စံချိန်စံညွှန်း သုံးစွဲ မှုတွေ တိုးတက်လာနေပါတယ်။ WTO/TBTစာခုျပ်မှာ အစိုးရ ပေါင်း ၁၃ဝ ကျော်က အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းတွေကို နိုင်ငံရဲ့ နည်းဥပဒေတွေမှာ အခြေခံအဖြစ်သုံးဖို့ ကတိကဝတ် ပြုထားကြပြီးဖြစ်လို့ မိမိ ထုတ်ကုန်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန် စံညွှန်းတွေအသုံးချပြီး ထုတ်လုပ်ထား မယ်ဆိုရင် တင်သွင်းမယ့် နိုင်ငံရဲ့ နည်း ဥပဒေတွေနဲ့ ကိုက်ညီတာကြောင့် ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်ကို လွယ်ကူစွာ ထိုးဖောက်နိုင် ပါလိမ့်မယ်။ ပြည်တွင်း ဈေးကွက်ကို လည်း စံနှုန်းမကိုက်တဲ့ ကုန်စည်တွေ ဝင်လာရင် တားမြစ်ကာကွယ်နိုင်ပါ တယ်။ဒါတင်မကဘဲ FTA တည်ထောင် ချိန်မှာဒေသတွင်းမှာ တစ်ပြေးညီသတ် မှတ်မယ့် စံချိန်စံညွှန်းတွေကလည်း အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းတွေ ကို အခြေခံမှာဖြစ်လို့ မိမိထုတ်ကုန်တွေ ကို အဲဒီ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ဒေသတွင်း ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုဆိုတဲ့ စိန်ခေါ် မှုကို ရင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် FTA မှာ အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ အစီအစဉ်တွေအရ ဒေသတွင်းမှာ အသိအမှတ် ပြုထားတဲ့ ထောက်ခံချက် လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးဌာနတွေက ရရှိ ခဲ့တဲ့စစ်ဆေးရေးအဖြေလွှာတွေကိုလည်း ဒေသတွင်း နေရာတိုင်းက လက်ခံနိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ MRA တွေအရ နှစ်ခါပြန် စစ်ဆေးရမှုကို လျှော့ချနိုင်လို့ စရိတ် လျော့ကျ နိုင်ပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းစဉ် တွေကို ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါ တယ်။ စစ်ဆေးတဲ့ အချိန်ကာလတိုသွား လို့ ဈေးကွက်ကို မြန်မြန်ရောက်နိုင်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှငွေ မြန်မြန်ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ အခြား အလားတူ ကုန်စည် တွေထက် အရင် မိမိကုန်စည်က ဈေးကွက်တင်နိုင်လို့ ဈေးကွက်မှာ အသာစီးရနိုင်ပါတယ်။ FTA လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ် မှုဒေသမှာ မိမိကုန်စည်ကို အခြားကုန် စည်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ထုတ် လုပ်သူတွေက နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်း တွေကိုသုံးပြီး ထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့ ဓာတ်ခွဲ ခန်းတွေနဲ့ လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး အဖွဲ့တွေဘက်ကလည်း အပြန်အလှန် သိ အမှတ်ပြုအစီအစဉ် MRA တွေမှာ ပါဝင်နိုင်အောင် ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့က အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်း၊ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ လက်မှတ်ထုတ်ပေး ရေး အဖွဲ့တွေဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းကြမှ သာ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ အပြောင်းအလဲမှာ လိုက်လျောညီထွေ ပါဝင်လှုပ်ရှားသွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဈေး ကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုများ တိုးမြှင့်လာစေရေးအတွက် လေကြောင်း သယ် ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍလည်း အရေးပါသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် ပူးပေါင်းပံ့ပိုး ဆောင်ရွက် ပေးလျက် ရှိပါသည်။ လေကြောင်းသယ်ပို့ကဏ္ဍတွင် ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများနှင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် ပြည်ပ နိုင်ငံများသို့ ချိတ်ဆက်ကာ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုကွန်ယက်နှင့် တစ်ဆက် တစ်ဆက်တည်း အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေမှုကို လည်း အဆင့်မီမီဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပြီဖြစ်ပါ သည်။ ပြည်တွင်း လေကြောင်းလိုင်းများ အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးရာတွင် ယခင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတိုင်ခင်က လေယာဉ်ကွင်း ၆၆ ခုသာရှိခဲ့ပြီး၊ ယခု ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် လေယာဉ်ကွင်း ပေါင်း ၆၉ ခုအထိ တိုးခဲျ့ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ လေယာဉ်ပြေးလမ်း အနေ ဖြင့် ယခင်က ပြေးလမ်းအရှည်ပေ ၅ဝဝဝ နှင့်အထက် ၂၁ ကွင်း၊ ပေ ၅ဝဝဝအောက်၄၅ကွင်းသာ ဝန်ဆောင် မှု ပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် ပြေးလမ်း အရှည်ပေ ၁ဝဝဝဝ အထက် ရှိသော လေယာဉ်ကွင်း ၁၁ ကွင်း၊ ပေ ၅ဝဝဝ အထက် ကွင်း ၂၇ကွင်းနှင့် ပေ ၅ဝဝဝ အောက် ကွင်း ၃၁ ကွင်းအထိ တိုးခဲျ့တည်ဆောက်ကာ အဆင့်မြှင့်ပြင် ဆင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့လေကြောင်းမှ ပြည်တွင်းလေယာဉ်ပြေးဆွဲမှုအပိုင်းတွင် ပူတာအို၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်၊ မန္တလေး၊ ကလေး၊ ခန္တီး၊ မုံရွာ၊ ဟုမ္မလင်း၊ နေပြည်တော်၊ ဟဲဟိုး၊ တာချီလိတ်၊ ကိုျင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ လွိုင်ကော်၊ မော်လမြိုင်၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်၊ ကော့သောင်း၊ ညောင်ဦး၊ စစ်တွေ၊ ဘားအံ၊ ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲ၊ ရန်ကုန်၊ ဘုတ်ပြင်းနှင့် လားရှိုး မြို့များသို့ ပြည်တွင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်အဖြစ် ပုံမှန်ပံျသန်းကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
မီးရထားလမ်း အခြေခံအဆောက်အအုံများ နိုင်ငံတစ်ခု၏ လူနှင့်ကုန်စည်ပို့ ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက် သာစွာဖြင့်ထိရောက်တွင်ကျယ်သောပို့ဆောင် မှုအတွက် မီးရထား ပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍ မှာလည်း အရေးပါလှသည်။ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ရထားလမ်းများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန် အောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ အဆင်မြှင့်တင်ခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန် ရန်နှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ပိုမို ဖြစ်ထွန်းလာစေရန် ရထားလမ်းသစ်များ၊ တိုးခဲျ့ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ လူစီးတွဲနှင့် ကုန်တွဲများကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအပိုင်း လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအပြင် ခရီးသွားပြည်သူများအဆင်ပြေစွာ သွားလာနိုင်ရေး အတွက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ အစိုးရရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်ကိုဗဟိုပြု၍ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း များသို့ ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်ရန် နေပြည်တော်-ပုဂံ၊ နေပြည်တော်-ပြည်၊ နေပြည်တော်-မန္တလေး၊ နေပြည်တော်-ရွှေညောင်၊ နေပြည်တော် -လွိုင်ကော်၊ နေပြည်တော်-ချောက်နှင့် နေပြည်တော်-ရန်ကုန်သို့ ရထားလမ်းများ တိုးခဲျ့ဖောက်လုပ်ပေး ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရန်ကုန်-ပြည် ရထားလမ်းသည် ပထမဆုံးဖောက်လုပ်သော ရထားလမ်းဖြစ်ပြီး၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားလမ်းသည် ဒုတိယမြောက်ဖောက်လုပ်သော ရထားလမ်း ဖြစ်သည်။ နယ်ခဲျ့အင်္ဂလိပ် တို့က မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုလိုနီအဖြစ် ကျွန်ပြုအုပ်ခုျပ်ခဲ့ကြရာတွင်၎င်းတို့ အတွက် အကိုျးရှိနိုင်သည့် ကားလမ်း၊ ရထားလမ်းများကိုသာ ဦးစားပေး၍ ဖောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး တစ်ပြေးညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမိုျးမရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မတိုင်မီက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရထားလမ်း ခရီးမိုင် ပေါင်း ၁၉၇၆ မိုင်၊ ဘူတာရုံပေါင်း ၄၈၇ ရုံသာရှိခဲရာမှ ယခုအခါ ရထားလမ်းခရီးမိုင် ၃၄၃၃ မိုင်၊ ဘူတာရုံပေါင်း ၈၇၅ ရုံနှင့် တိုးတက် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော မြန်မာ့မီးရထားကဏ္ဍ စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်ပုံ ၁၉၈၈ခုနှစ် ၂ဝ၁ဝခုနှစ် တိုးတက်မှု ၁ ရထားလမ်းခရီး (မိုင်) မိုင် ၁၉၇၆ ၃၄၃၃ ၁၄၅၇ ၂ ဘူတာ ရုံ ၄၈၇ ၈၇၅ ၃၈၈ ၃ တံတားကြီး/တံတားငယ် စင်း ၅၆၅ဝ ၁ဝ၉ဝ၈ ၅၂၅၈ ရထားပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ စဉ် အကြောင်းအရာ ၁၉၈၈ ၂ဝ၁ဝ တိုးတက်မှု ၁ လူစီးရထားပြေးဆွဲမှု ၂၄၃ ၄၁၂ ၁၆၉ စင်း ၂ ကုန်ရထားပြေးဆွဲမှု ၁၈ ၂၁ ၃ စင်း ၃ စက်ခေါင်း ၂၃၉ ၃၁၉ ၈ဝ စင်း ၄ ရထားလမ်းခရီး (မိုင်) ၁၉၇၆ ၃၄၃၃ ၁၄၅၇ မိုင် ၅ သံလမ်း (မိုင်) ၂၇၉၃ ၄၄ဝ၂ ၁၆ဝ၉ မိုင် ၆ ဘူတာရုံ ၄၈၇ ၈၇၅ ၃၈၈ ရုံ ၇ ရထား၊ တံတားစုစုပေါင်း ၅၆၅ဝ ၁ဝ၉ဝ၈ ၅၂၅၈ စင်း ၈ ခရီးသည်ပို့ဆောင်နိုင်မှု(၁)နှစ်သန်း ၄၈ .၈ ၆၇ ၁၈ .၂ သန်း ၉ ကုန်တန်ချိန်ပို့ဆောင်နိုင်မှု(၁)နှစ်သန်း ၁ .၅ ၃ ၁ .၅ သန်းဖောက်လုပ်ဆဲရထားလမ်းသစ်များ စဉ် ရထားလမ်းပိုင်း ခရီးမိုင် ၁ သရက်-ကျွန်းချောင်း ၁၈၃ ဒသမ ဝဝ ၂ ကသာ-ဗန်းမော် ၉၈ ဒသမ ဝဝ ၃ မိုးနဲ-ကိုျင်းတုံ ၂၂၆ ဒသမ ဝဝ ၄ ပျော်ဘွယ်-နတ်မောက်-ကန်ပြား-မကွေး ၉၅ ဒသမ ဝဝ ၅ ထားဝယ်-မြိတ် ၁၃၂ ဒသမ ဝဝ ၆ ရေချမ်းပြင်-အမ်း-မင်းဘူး ၂၄၅ ဒသမ ၅၄ ၇ ပုသိမ် (ဘဲဂရက်)-ညောင်တုန်း-ရန်ကုန် (လှိုင်သာယာ) ၈၉ ဒသမ ဝဝ ၈ ပြည် (ရွှေတံခါး)-တောင်ငူ (ကျေးတော)-နေပြည်တော် ၁၂ဝ ဒသမ ဝဝ ၉ ဟင်္သာ-ညောင်တုန်း ၄၈ ဒသမ ဝဝ ၁ဝ နေပြည်တော်-တပ်ကုန်း-ပင်လောင်း ၁ဝ၅ ဒသမ ဝဝ စုစုပေါင်း ၁၃၄၁ ဒသမ ၅၄ဆက်လက်ဖောက်လုပ်မည့် ရထားလမ်းသစ်စီမံကိန်း စဉ် လမ်းပိုင်း ခရီးမိုင် ၁ ပဲခူး-ခရမ်း-သုံးခွ-သန်လျင် (အုတ်ဖိုစု) ၆၇ ဒသမ ၂၅ ၂ လားရှိုး-မူဆယ် ၁၄၅ ဒသမ ဝဝ ၃ ကလေး-တမူး ၈၄ ဒသမ ၃၅ စုစုပေါင်း ၂၉၆ ဒသမ ၆ဝ
မြန်မာနိုင်ငံ ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ မြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ
(၉)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ထိုင်း ပူးတွဲကော်မတီ (JCC) ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးကျင်းပ